ကဒါဖီ သင်ခန်းစာနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ကဒါဖီနဲ့ တူသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက အမျိုးသားညီလာခံမှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးထားတဲ့ ဥပဒေကို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှာ ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းခဲ့ရပါသလဲ။ ဘယ်သူကိုမှ မတိုင်မပင်ဘဲနဲ့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသောင်းညွန့် (ဥပဒေပညာရှင်နှင့် အငြိမ်းစား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ကို သူ့အခန်းထဲခေါ်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ ရေးခိုင်းရပါသလဲ။
ဦးသောင်းညွန့် ငါးပါးသီလကံကို ချိုးဖောက်ခဲ့ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း နေပြည်တော် အတွင်းစည်းထဲက သတင်းတွေ ကျနော့်ထံ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း ၁၄၊ ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ အပိုဒ် ၄၄၅ မှာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် နဝတနှင့် နအဖတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ တာဝန်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ဆက်ခံသည်။ ယင်းအဖွဲ့၊ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တဦးဦး သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တဦးဦး၏ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အကြောင်းပြုလျက် ယင်းတို့အား တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်း မရှိစေရလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။)
ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်မြို့ မြန်မာသံရုံးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလက အဖြစ်အပျက်လေး တခုကို သွားပြီး သတိရမိပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်းက သံရုံးအမှုထမ်းတဦး မြန်မာနိုင်ငံကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီသံတမန်က ကျနော့်အတွက်၊ အထက်က ဗိုလ်မှူးအတွက် အရေးတကြီး သတင်းစုံစမ်းဖို့ ညွှန်ကြားချက် ပေးလိုက်တယ်လို့ ပြောတော့ ဘာလဲလို့ ကျနော်က မေးမိတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို နိုင်ငံတကာတရားရုံးတင်ဖို့အထိ စဉ်းစားနေတာ ရှိမရှိ သိချင်တယ်၊ အမြန်စုံစမ်းပြီး အကြောင်းပြန်ပေးပါလို့ ညွှန်ကြားလိုက်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ကျနော် ပြုံးမိလိုက်တယ်။
သြော် … ကိုယ်ခံရမှာကျတော့ ကြောက်တတ်လိုက်တာ၊ သူတပါးတွေကျတော့ “အပြတ်ရှင်းပစ်လိုက်၊ အစိတ်သားတောင် မချန်နဲ့၊ ကုလား၊ လူမှမဟုတ်တာ၊ အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ချလိုက်” ဆိုပြီး အမိန့်တွေ ပေးနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရယ်။
အဲဒီအချိန်က ကမ္ဘာမှာ ယူဂိုဆလားဗီးယား သမ္မတဟောင်း မီလိုဆီဗစ်၊ လိုက်ဗေးရီးယား သမ္မတဟောင်း ချားလ် တေလာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား အာဏာရှင်ဟောင်း ပိုပေါ့၊ ဆူဒန်သမ္မတ ဘတ်ရှီးယားတို့ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေချိန်ဖြစ်လို့ သူ့အလှည့်များ ဘယ်တော့ရောက်မလဲ ဆိုတာကို စိုးရိမ်လို့ စုံးစမ်းခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာ ကျနော် နားလည်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း ဝတ်ကျေတန်းကျေပဲ လောလောဆယ် အခြေအနေမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ဝါရှင်တန်ဒီစီက ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ နယူးယောက်က World Trade Center အတိုက်ခံနေရလို့ မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်မဝင်စားနိုင်သေးဘူးလို့ သတင်းပြန်ပို့ပေးခဲ့ရတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၁ အရေးခင်းဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် ဝမ်းသာစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဘယ်လောက် ဝမ်းသာသလဲဆိုရင် တခြားနိုင်ငံတွေက ခေါင်းဆောင်အသီးသီး အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဘုရ်ှထံ ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာတွေ အသီးသီးပို့နေကြတဲ့အချိန်၊ ကျနော်တို့က ပို့ဖို့တင်ပြတော့ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်ပြီး အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ မပို့ဘူး။ နောက်ဆုံး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန Burma Desk က သံရုံးကို မေးလို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပြောတော့မှ မပို့ချင်ပို့ချင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ပို့လိုက်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဘာဖြစ်လို့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် တောင်းခံရသလဲဆိုရင် ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့အပေါ် သူကိုယ်တိုင် တာဝန်မယူရဲလို့ပဲ။ သူ တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက် အမိန့်ပေးခဲ့တာတွေကို ပြောရရင်တော့ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် မောင်းတော နယ်မြေမှာ (ဘင်္ဂလီ) ၄၀၀ ကျော်ကို ရှင်းပစ်ဖို့ အဲဒီအချိန်က အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ဝင်းမြင့် (နောင် အတွင်းရေးမှူး ၃၊ စစ်ရေးချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝင်းမြင့်) ကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
အဲဒီတုန်းက (ဘင်္ဂလီ) သောင်းကျန်းသူတွေက ဘူးသီးတောင် မောင်းတော နယ်မြေမှာ တနေ့တည်းမှာ မိုင်း ၁၈ လုံးခွဲပြီး ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ စစ်တပ်ကပြန်ပြီး စစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့အခါ သူပုန်ရော အရပ်သားပါ စုစုပေါင်း လူ ၄၀၀ ကျော် အရှင်ဖမ်းဆီးရမိတယ်။ စစ်ရုံးချုပ်ကို သတင်းပို့တော့ “ကုလား၊ လူမှမဟုတ်တာ ရှင်းပစ်” လို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အမျိုးသားညီလာခံကထွက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက NLD ကို အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်ပြီး NLD ဆိုရင် ဆွေမျိုးအစဉ်အဆက် ကြောက်သွားအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အကျပ်အတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ထောက်လှမ်းရေးကို ခိုင်းစေခဲ့တယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ စစ်တပ်အင်အားတွေကို သုံးပြီး ရွာတွေရွှေ့ခိုင်းတာမှာ မလိုက်နာရင် အစိတ်သား (၂၅ ကျပ်သား) ဝမ်းဗိုက်ထဲက ကလေးတောင် မချန်နဲ့လို့ အပြတ်ရှင်းဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် မေလမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ဗိုလ်ချုပ် ကြည်မင်း (ရေတပ် ဦးစီးချုပ်ဟောင်း)၊ ဗိုလ်ချုပ် မြင့်ဆွေ (လေတပ် ဦးစီးချုပ်ဟောင်း)၊ ဗိုလ်ချုပ် သူရမြင့်အောင် (စစ်ရေးချုပ်ဟောင်း)၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း (အမှတ် ၁ လျှပ်စစ် ဝန်ကြီး) တို့ကို ခရစ္စတီးကျွန်းမှာ အပြစ်မဲ့ အရပ်သား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကလေး ၈၁ ယောက်တို့ကို သတ်ပစ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီခရစ္စတီးကျွန်းမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ရှိနေတာကြောင့် သက်သေထွက်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲရင်းကိစ္စမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံဖို့ ဗိုလ်ချုပ် စိုးဝင်း (ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း)၊ ဦးအောင်သောင်း (စက်မှု ၁ ဝန်ကြီး) တို့ကို ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းများ၊ တပ်မတော်အရာရှိများ၊ ရဲအရာရှိများက သက်သေထွက်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ကျနော် သိတာတွေပါ။ တခြား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်သူလူထုတွေသိတာ အများကြီး ရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွင်းက လူစွမ်းကောင်းများ ထွက်ဖို့လိုနေပါပြီ။ မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ရမယ့်အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီး အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့မိသားစုကို လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ကဒါဖီနဲ့ မိသားစုလို နိုင်ငံတကာ စစ်ခုံရုံးပို့ပြီး အရေးယူနိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Labels:အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း သတင်း/ဓါတ်ပုံ, သတင်း/ဆောင်းပါး
ပြည်သူ အတွက် ပုခက်လွှဲသော လက်
ပြည်သူ အတွက် ပုခက်လွှဲသော လက် ( အပိုင်း ၁ )
မေး -- ၈၈ ကစလုပ်တာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးကိုအမိူးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုယုံကြည်မူ
မီးမီး--- ၁၉၈၈ မှာကျမအသက် ၁၆ နှစ် ၁၀ တန်းကျောင်းသူဘဝပဲရှိပါသေးတယ်။အဲဒီအချိ်န်မှာကျမလုပ်
ပွဲတွေဖြစ်ခဲံတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတဆင့်ကျမဘဝကိုအဲဒီအချိန်ကမှ၁၉၈၈ ဟာကျမဘဝ ရည်ရွယ်ချက်ကော့
ရည်မှန်ချက်တွေကော တစ်ကဲ့ကို အခိူးအကွေကြီး ၁ ခု ပေါ့။ပြောင်းလဲပေးတဲ့နှစ်လို့လဲပြောရမယ့်။
မေး-- မမီးအနေနဲ့က အချုပ်ကလည်း၁ ခါကျဘူးတယ် ထောင် ကလည်း ၂ ခါ ကျဘူးတယ် ပြန်ထွက်လာ
ပြီး သိပ်မကြာခင် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မဖြစ်ခင်မှ ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ဖမ်းရတဲ့ အချိန်
အဲဒီအချိန်မှာ မမီးမီး လမ်းပေါ်ထွက် တရားဟောတယ်-ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမူပါဝင်
မီးမီး-- ၂၀၀၄ မှာ အစ်ကိုတွေပြန်လွတ်လာတဲ့အခါ ၈၈ ကျောင်သားများအနေနဲ့ကျမတို့လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ Aungust လ ၂၁ နေ့ညမှာ အစ်ကိုတွေကိုနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ ၂၂ ရက်နေညမှာ
ဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ဟာ ၈၈ ကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ ကျမတို့ဟာ ကျောင်းသားတွေ
ဖြစ်တယ်- ကျောင်းသားတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိတယ် -ကျမတို့အကိုတွေမရှိရင်တောင်မှ
ကျမတို့အကိုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ ၈၈ ကျောင်သားမျိုးဆက်အဖွဲ့ရဲ့ အလုပ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လုပ်ရမယ်
အလုပ်တွေအားလုံးဟာကျမတို့အပေါ်မှာ တာဝန်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကလည်း ကျမဟာ
အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေး နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ် တာဝန်ယူမှု ဒီဆက်
သွားရမဲ့တာဝန်တွေဟာ ကျမတို့အကိုတွေကိုဖမ်းဆီးထားပေမဲ့ ကျမတို့အပေါ်မှာပုံလာပြီး- ဒီတာဝန်ကို
မေး --မမီးမီးအနေနဲ့ ပထမအကြိမ် ငယ်တဲ့အချိန်ထောင်ကျခဲ့တယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်နဲံ
၂၀၀၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာကျတဲံအခါမှာထောင်ထဲ့မှာ မမီးမီးတို့အပေါ် ဆက်ဆံမှုတွေမတူတော့
ထောင်အာဏာပိုင် တွေနဲံ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်မှာ မမီးမီးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်းသုံးသပ်ချက်။
မီးမီး အဓိက ကတော့ ထောင်ထဲ့မှာ ဆက်ဆံမှုတွေပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာက ထောင်အားလုံးမှာ
တပြေးညီပေါ်လဆီအရ အမှန်တကယ်က ပေါ်လဆီက သူတို့ကောင်းကောင်းချထားလိမ့်မယ်
ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ..ဒါပေမဲ့ ထောင်အားလုံးဟာ တစ်ပြေးညီပြောင်းလဲ့သွားမဟုတ်ဘူး..
အာဏာရှင်စံနစ်ရဲ့အကြွင်းအကျန်တွေဟာ တချို့ထောင်မှုး+ထောင်ပိုင်တွေမှာအများကြီးတွေရတယ် ။
ထောင်ဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းအများကြီးတွေရတယ်- နဂိုအာဏာာရှင်စံနစ်ရဲ့ အမွေဆိုးတွေဟာသူတို့
ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့အခါကျတော့ ကျမတို့ကိုဒီပေါ်လဆီ အပြောင်းအလဲမှာ သူတိုက
ချင်းတဲ့အခါကျတော့ထိုအပေါ်မှာ အရင်တုန်းက ပုံစံအတိုင်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမဟုတ်ရင်တောင်မှနည်းနည်းခပ်ခပ်ညစ်ညစ်တော့ဆက်ဆံသေးတယ်။စကား
ပြောတာကအစဆက်ဆံတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတစ်ဖြေးဖြေးနဲ့နိုင်ငံရေးသက်တမ်းကလည်းရင့်လာတယ် အတွေအကြုံတွေလည်းများလာတဲ့အခါကျတော့ - ကျမတို့ဟာတချိန်တုန်းကကျတော့ဒီအာဏာပိုင်
အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရန်သူလို့ မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ ကျမတို့ဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလိုလားတဲ့
လူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့--ကျမတို့ကိုယ့်တိုင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရန်သူလိုမြင်နေရင်တော့ ကျမတို့
ကြောင်းသွားဖို့ကျမတို့ဖန်တီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကျမတို့နဲ့အနီးစပ်ဆုံးပြည်သူကို ကျမတို့
တက်နိုင်သလောက့်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒီအခါကျတော့ပေါ်လဆီကိုတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေး
မှာအဆင်ပြေအောင် ပေါ်လဆီကို လျှော့ လိုက်တယ်။ အရင်တုန်းကလိုတော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမဆက်ဆံ
ဘူး။ဒါပေမဲ့ ကျမတို့အထဲ့မှာ ကျမတို့ တောင်းဆိုတာတွေ ကိုတက်နိုင်သလောက်လိုက်လျှောမှု ပြုခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့သူတိုက ဘာကိုပြန်ဒုက္ခ ပေးလည်းဆိုတော့ ကျမနေတာက ရန်ကုန်မြို့ ဒါပေမဲ့ ကျမ ကို ကသာကို
ပိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ကျမအိမ်မှာလိုက်ရတဲ့မိသားစု အဓိက ကျမအမျိုးသားနဲ့ ကလေး နှစ်ယောက် တစ်လှည်စီ
ဆိုတအားအေးတယ်။ ဟိုမှာနေတဲ့ကလေးက ကသာမြို ရဲံ့ ဆောင်းတွင်းဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့မအေဆိုတဲ့
အခါကျတော့လာတွေရတယ်။ အမျိုးသားကလည်းမိန်းမဆိုတော့လာတွေရတယ်..အဓိကဒီအခေါက်က ကျမတိုကိုနယ်စပ်ဒေသတွေကိုပိုလိုက်တာဟာ ကျမတို့အတွက်အမြတ်အများကြီး ရရှိခဲ့တယ်..အိမ်မှာရှိ
တဲ့မိသားစုတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ကျမတိုရရှိခဲ့တဲ့အမြတ်ကတော့ ရှင်းပါတယ် ကျမတို့ဟာဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုရောက်တဲ့ဒေသ ကအရေးအကြီးဘူး..ကိုယ့်ကျင့်တဲ့တရားကသာ
အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ ကျမတို့ပတ်ဝန်ကျင်းကို့ အတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်ပြောင်းလဲ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲ့ခဲ့
တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျမတို့မှာမိတ်ဆွေအသစ်တွေ အများကြီးရခဲ့တယ်။ တောင်းတန်းဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသား
တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ိ ဟိုး မြန်မာပြည်အထက် အောက် အဲဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ ချစ်ကြည်မှု ယုံကြည်မှု
ကျမတို ရလာတဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ယနေ့ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်ချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်း ခရီးစဉ်တွေဟာဒီလောက်
မေး -- အိမ်ထောင်သည်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တောက်လျှောက်
မီးမီး--- အဲဒါပြောရမယ်ဆိုရင် ကျမတုံးက သူများတွေပြောသလိုပေါ့ ဒီမိုကရေစီလင်မယားလိုပဲပြောရမ
လားပေါ့နော်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျမခင်ပွန်းကလည်း ၁၉၈၈ မှာ အထက ၁ ကျောင်း
တာမွေ ရဲံ့ အကသ ကျောင်းသားတပ်ဦးရဲ့ လှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်စပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစလို့ N.L.D Mumber တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး-မြိုနယ်လူငယ်တာဝန်ခံတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘဝက စလို့ကျမတို့အိမ်ထောင်ကျခဲ့တယ်. အိမ်ထောင်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့ နဂိုကနိုင်ငံရေးအခြေခံရှိတဲ့ ကျမရဲ့ခင်ပွန်းသည်ဟာ ကျမရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို နားလည်းမှုများစွာနဲ့လိုက်လျှောခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းပံပိုးမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ကျမဘယ်ထောင်ကျကျ
ကျမ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ထဲ့ကထောင်ထဲ့မှာတောက်လျှောက်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်း ကျမယောက်ကျားနဲ့ ယောက်က္ခမ နဲ့ ထားခဲ့ရတယ်။ကျမ ကလေးတွေနဲ့ ၅ နှစ် ၉ လ တွေခွင်မရခဲ့ဘူး ၂ နှစ် ၆လ တစ်ယောက်
၄ နှစ် ၆လ တစ်ယောက်ထားခဲ့ရတယ် အဲဒီအချိန်မှာတော့သူအဖေကဖခင်စိတ်နဲံဒီအရွယ်ငယ်ငယ်မှာ ကလေးတွေစိတ်ထိခိုက်မှာစိုးလို့သူအဖေကခေါ်မလာလို့တွေခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၇ မှာတောတောင်လျှောက်
မေး….. ဒီဘဝတစ်လျှောက်မှာ ၁၀ နှစ်နီးပါးထောင်ထဲ့မှာနေလာတာဆိုတော့အဲဒိအပေါ်မှာဒီနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့
တဲ့အတွက်ထောင်ထဲ့မှာ အနှစ် ၂၀ နေခဲ့တာကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလည်း။
မီးမီး ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီအချိန်အထိပေါ့ နိုင်ငံတကာသုံးဘာသာစကားအားနည်းတယ်- စာပေလေ့လာမှု
ကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းမပြီးခဲ့ဘူး Final honus မှာပဲ အဖမ်းခံရတယ် ပြန်ထွက်လာတော့လည်းကျောင်းပြန်တက်ခွင်မရဘူး
ယနေ့ထိတိုင်လည်း ကျောင်းပြန်တက်ခွင်မရဘူးဘွဲ့လက်မှတ်သွားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လဲ့ ငွေ ၃၀၀၀၀
လောက်ပေးမှရိုးရိုးဘွဲ့လက်မှတ်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးအခါကျတော့ ကျမ အနေနဲ့စဉ်စားစရာတွေ အများကြီး
ရှိတယ် ကျမ ကအလုပ်ရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး အဲဒီလိုမျီုးတွေရှိတယ်အဲဒီအခါကျတော့ ဒါပေမဲ့သူငယ်ချင်းတွေ
အချိန်မှာ baise ကိုတက်နေတဲ့အချိန် နင့်တိုPhd ယူလာခဲ့ပြီးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုနင်တိုယူလာတဲ့အပေါ်
မှာကိုယ်ကချီးကျုးလေးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျမ မဖြစ်လိုက်ရကောင်းလားဒိလိုမျိုးကြီး သူတိုကျတော့
အသက်ချင်းတူတောင်မှမရကောင်းလားဆိုတဲ့ ဒီလိုမျိုး ကျမ ဘဝမှာ နောင်တာဆိုတာ ဘယ်တော့မှ
ရှိမှာမဟုတ် ဘူးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျမဟာနိုင်ငံရေးထဲ့ကို ပြည်သူအတွက်
ကျမဟာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သံဒီဌာန် ချပြီးလုပ်ခဲံတဲံအတွက် နောင်တဆိုတာလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ပြည်သူ အတွက် ပုခက်လွှဲသော လက် ( အပိုင်း ၂ )
မေး ။ ။၈၈မျိုးဆက်မှ ပါတီထောင်မည်ဟုပြောထားတယ်လေ အဲဒီတော မမီးမီးအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ကော ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသလား….။
မီးမီး ။ အဲဒါက နဲနဲတော့ ခက်တယ်။ကျွန်မကပေါ့နော်၊ ဒီလတ်တလောမှာတော့ ဒီပြည်သူ့ အခြေပြု ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ပြည်သူရဲ့ အသံကို အနီးကပ်နားထောင်ချင်တယ်၊ နောက်ပြီးတော့ အပြောင်းအလဲ ကိုလည်း တကယ့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တခုတည်ထောင်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ ကျွန်မတို့က ပြည်သူကနေပြီးတော့ ပြည်သူ့ အခြေပြုပေါ့နော်၊ အစိုးရ တရပ် ပေါ်ထွက်လာဖို့ကို ကျွန်မတို့က ကြိုးစားချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ လောလောဆယ်ကတော့ ကျွန်မတို့က ပြည်သူနဲ့ပဲ အတူတူ ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ ပြည်သူ့ အကျိုးကို အနီးကပ် ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ ရှိတယ်။ လွှတ်တော်နဲ့ ကျွန်မတို့ ဟာဆိုရင်လဲ ဘယ်ခြေ ညာခြေ လိုပါပဲ။အဓိကကတော့ ကျွန်မတို့ဟာ ပြည်သူရဲ့အသံကိုအနီးကပ် နားထောင်ပြီးတော့ ဒီလွှတ်တော်ထဲကို ကျွန်မတို့က တွန်းအားပေးတဲ့သဘောပေါ့နော် ၊လိုအပ်တဲ့ တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်ကျရင်တော့ ပါတီနိုင်ငံရေးဖက်ကို ပြောင်းချင်လည်းပြောင်းမယ်၊ မပြောင်းချင်လည်းမပြောင်းဘူးပေါ့နော်။ အဓိက က ကျွန်မတို့ရဲ့ ရင်တွင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုက တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုပေါ့နော် တိုင်းပြည်ကို တကယ့် ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်စစ်စစ်၊ တကယ့်ကိုပြည်ထောင်စုစစ်စစ် တိုင်းပြည်တခုကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့အတွက် ဒီတိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုနဲ့ အနီးကပ်နေနိုင်ဖို့ဟာ အဓိက ကျတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။
မေး ။ ။မမီးမီးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ထဲမှာ ဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်ချင်လဲ၊ အဲဒီမျှော်လင့်ချက်ကကောအခုအခြေအနေမှာ ဘယ်အတိုင်း အတာထိ ရောက်နေပြီလို့ သုံးသပ်လို့ ရမလဲ။
မီးမီး ။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး(၁၃၅) မျိုး ရှိတဲ့ အခါကျတော့ ဒီတိုင်းရင်းသား အားလုံးကိုပေါ့နော် နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးအားလုံးကို တန်းတူ တူညီမှုကို ကျွန်မတို့ ရစေချင်တယ်၊ အဓိက ကတော့ ကျွန်မတို့ ကယန်းကို သွားတဲ့ အခါ လောပိတ ကလာတဲ့ ဓာတ်အားပေးလိုင်းကြီးတွေကို သူတို့က မပွန်းမပဲ့ အောင် စောင့်ရှောက်ရတယ်။ ဒါကြီးကို ထမ်းထားရပြီးတော့ အောက်မှာက ဆီမီးတိုင်နဲ့ စာဖတ်နေရတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ မောင်နှမ သွေးချင်းတွေကို တွေ့ရတဲ့ အခါမှာ ကျွန်မ စိတ်မကောင်းပါဘူး။အခု ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က ကျွန်မ ချင်းပြည်နယ်က ပြန်လာခဲ့တယ်၊ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဒီလိုပဲ၊ တကယ့်ကို မီးမရှိ ၊ရေမရှိ နဲ့ပေါ့နော်၊ တောင်တန်းဒေသမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးတော့ နေခဲ့ရတယ်။တကယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ (ရိ) ရေကန်ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံ အတွက် တကယ့်ကို ပြည်ပ ဝင်ငွေရဖို့ပေါ့နော်၊နိုင်ငံခြားသားတွေကို စွဲဆောင်ဖို့နေရာတခုဖြစ်တယ်၊ကျွန်မတို့ နိုင်ငံသားတွေတောင် မသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ၊တကယ့်ကို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါတယ်၊ကျွန်မတို့ နိုင်ငံဟာ သယံဇာတ ကလည်း ရှားပါးတဲ့ နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး၊အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးဟာ ညီညီ မျှမျှနှင့် တကယ့်ပြည်ထောင်စု စစ်စစ် တိုင်းပြည်တခု တန်းတူညီမျှရှိတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့၊ငြိမ်းချမ်းတဲ့၊တရားဥပဒေ မျှတမှုရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တခုကို ကျွန်မ တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုတည်ဆောက်တဲ့ အခါမှာလည်း အခွင့်အရေးညီတူညီမျှနဲ့ပေါ့နော် တိုင်းရင်းသားအားလုံး၊တောင်တန်းမြေပြန့်မခွဲခြားပဲ ပညာရေးကအစပေါ့နော်၊တူညီစွာနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်တခုကို ကျွန်မ မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမျိုး တိုင်းပြည်တခုဖြစ်ဖို့အရေးကလည်း ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ အခုဟာက တော်တော်ကြိုးစားနေရတယ်ပေါ့နော်။အဓိက ကတော့ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းလာမယ်၊ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်း တကယ့်ကို အသိပညာတွေ၊အတတ်ပညာတွေ တိုးပွားလာမယ်၊နိုင်ငံရေးအသိစိတ်ဓာတ်တွေ နိုးကြားလာမယ်ဆိုရင်တော့ တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ဟာ ကျွန်မတို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ တိုင်းပြည်တခုကို ရောက်လာမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလို ရောက်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ဟာ ပြည်သူတွေကို မျှော်လင့်ချက်မပေးချင်ဘူး၊ကျွန်မဖြစ်စေချင်တာက ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မျက်စိပိတ်၊နားပိတ်၊ပါးစပ်ပိတ်ပြီးတော့ နေခဲ့ရတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ပြည်သူတွေ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အလုပ်ပါ၊ငါတို့ကတော့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်၊ဘယ်အစိုးရတက်တက် ငါတို့အစိုးရပဲ။ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်ရင်လည်းခံရမှာပဲဆိုတဲ့ အကြောက်တရားက လွှမ်းမိုးနေတယ်။အဲဒီလို လွှမ်းမိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေကို ကျွန်မက မျှော်လင့်ချက်မပေးချင်ဘူး၊ပုဂ္ဂိုလ် တစုံတဦး(သို့)အစိုးရကို မျှော်လင့်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်၊ငါတို့လည်း ဒီအခွင့်အရေးတွေ ငါတို့မှာရှိတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို သိစေချင်တယ်၊အခွင့်အရေးရအောင်လည်း ငါတို့ဘယ်လိုတောင်းဆိုရမယ်ဆိုတဲ့ သတ္တိတွေလည်းပြည်သူတွေမှာ ရှိစေချင်တယ်၊နောက်တခုက ဒီအခွင့်အရေးနှင့်အညီ ငါတို့ ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျ ကျင့်ကြံရမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့ နိုင်ငံသားလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအပေါ် သစ္စာရှိမှုပေါ့နော်၊အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကို ကျွန်မတို့က ပြည်သူတွေကို၊အတတ်ပညာ၊အသိပညာစတဲ့ ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို အများကြီးလုပ်ချင်တယ်၊အဲလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ မဝေးတော့ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး ။ မမီးမီးတို့လို နိုင်ငံရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အခြေအနေအတိုင်းအတာအပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
မီးမီး ။ အခုအခြေအနေကတော့ နိုင်ငံရေးရစီးကြောင်းထဲမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုဟာ အရင်ကထက်စာရင် ပိုပြီးတော့ များလာတယ်။များလာတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။တပိုင်းက အချို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မရှိဘူး၊အများသွားရင်သွားတယ်၊အများတက်ရင်တက်တယ်၊မေးလိုက်ရင် စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မသိဘူး။အဲဒီလို အမျိုးသမီးတွေလိုမျိုး ကျွန်မတို့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တခုပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု၊နားလည်မှု၊တာဝန်ယူနိုင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းစေချင်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်ထက်စာရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုနှုန်းများလာတယ်၊ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၄% ပဲရှိတဲ့ အတွက် ကျွန်မတို့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးကြိုးစားရအုံးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံကနေပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို ဘာများပြောစရာရှိပါသလဲ။
မီးမီး ။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်၊စနစ်ကို ဦးတည်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲ တခုကို ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာကြုံနေရပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေဟာလည်း မျက်စိပွင့်၊နားပွင့်၊ပါးစပ်ပွင့်နှင့် အရင်တုန်းကလို အကြောက်တရားကြီးစိုးမနေပဲ ငါသည်လည်း နိုင်ငံသားဖြစ်သည်၊ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံရေးမှာ တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်ကို လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ရှိပြီးတော့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မမေ့ မလျော့ပဲနှင့် အမြဲတမ်း လေ့လာ၊မှတ်သား၊ လုပ်ဆောင်မယ်၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း အားကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ကြပါလို့ ကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
မမီးမီး နှင့် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ အင်တာဗျူးမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
တရုတ်​တို့ရဲ့ ပြည်​ပ စီမံကိန်းကြီး​တွေမှာ အတိုးနှုန်းကြီးကြီးနဲ့ ​ချေး​ငွေထုတ်​
​ပေးပြီး၊ ဖွတ်​အမြီးနဲ့ ဖွတ်​ကိုပြန်​ချည်​တဲ့ စီးပွား​ရေးလုပ်​နည်း လုပ်​ဟန်​
အလုပ်​မဖြစ်​​တော့ဘူးဆိုတာ ရှီကျင့်​ဖျင်​လည်း သ​ဘော​ပေါက်​တယ်​ ထင်​ရဲ့..
အ​ရှေ့အလယ်​ပိုင်းနဲ့ အာဖရိကမှာရှိတဲ့ တရုတ်​ရဲ့ Belt & Road Initiative
မပျက်​ဖို့အတွက်​ ဇူလိုင်​လအတွင်းမှာ ချစ်​ကြည်​​ရေးခရီး​တွေထွက်​၊ အာမခံ
ချက်​​တွေ​ပေး၊ ပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​မှု​တွေလုပ်​နဲ့ အ​တော်​​လေဗျာများ​နေတာ
ထရမ့်​ရဲ့ တရုတ်​ရဲ့သွင်းကုန်​​တွေအ​ပေါ်မှာ ၅၀ဘီလီယံ​ပေါ်မှာ အခွန်​၂၅%
​ကောက်​ခံမှုနဲ့အတူ တရုတ်​ဘက်​ကလည်း အ​မေရိကန်​သွင်းကုန်​​တွေအ​ပေါ်
မှာ အခွန်​ပြန်​စည်းကြပ်​မှုနဲ့ အတူ ကုန်​သွယ်​​ရေးစစ်​ပွဲ စတင်​လာမဲ့ အရိပ်​အ
​ယောင်​ ​တွေ့လာရတယ်​.. အ​မေရိကန်​ရဲ့ ကုန်​သွယ်​​ရေးလို​ငွေ နှစ်​စဉ်​နှစ်​တိုင်း
၁ထရီလီယံ ပြလာမှုနဲ့အတူ ထရမ့်​က တရုတ်​ကို နည်းပညာခိုးယူမှုအ​ကြောင်း
ပြချက်​နဲ့ ကုန်​သွယ်​​ရေးစစ်​ပွဲကို ဆင်​နွှဲပြီး၊ စစချင်းမှာ တရုတ်​သာမက EU, အိ
န္ဒိယတို့ရဲ့ အလူမီနီယံနဲ့ သံမဏိသွင်းကုန်​​ပေါ်မှာ အခွန်​စည်းကြပ်​မှုလုပ်​ခဲ့တယ်​..
တရုတ်​ရဲ့ WTOကို တိုင်​ကြားမှု လုပ်​ပြီး အ​မေရိကန်​သွင်းကုန်​ ပဲပိစပ်​၊ အမဲ
သားအ​ပေါ် တန်​ပြန်​အခွန်​စည်းကြပ်​ချိန်​မှာ ထရမ့်​က ရုရှားသမ္မတပူတင်​နဲ့
ဖင်​လန်​နိုင်​ငံ ဟယ်​လ်​ဆင်​ကီးမှာ ထိပ်​သီး​ဆွေး​နွေးပွဲလုပ်​ပြီး ပူတင်​နဲ့ အ​ပေး
ထပ်​ပြီး ဂျာမန်​အဓိပတိမာကယ်​လ်​နဲ့ ​တွေ့ဆုံပြီး EUရဲ့ အဓိကသွင်းကုန်​​တွေ
​ပေါ်မှာ အခွန်​စည်းကြပ်​မှုမလုပ်​ဘူးဆိုတဲ့ မက်​လုံး​ပေးမှုနဲ့အတူ အ​မေရိကန်​
​ဒေါ်လာ ခိုင်​မာအား​ကောင်းလာပြီး တရုတ်​ရဲ့ယွမ်​​ငွေတန်​ဖိုး ကျဆင်းလာတဲ့
အချိန်​မှာ နျူးကလီးယားစာချုပ်​ထဲက နှုတ်​ထွက်​မယ်​လို့ အီရန်​အ​ပေါ် ​လေ
သံပစ်​ခဲ့တယ်​.. အီရန်​ကလည်း ​ကမ္ဘာရေ​ကြောင်းကုန်​သွယ်​​ရေးအချက်​အချာ
ကျတဲ့ ​ဟော်​မုခ်​​ရေလက်​ကြားကို ပိတ်​ဆို့မယ်​ဆိုတဲ့ အသံထွက်​လာတာနဲ့ ​ဆော်​
ဒီကို ​ရေနံတိုးထုတ်​ခိုင်းခဲ့တယ်​.. ​ဒေသတွင်းပြိုင်​ဖက်​ ဖြစ်​တဲ့ ​ဆော်​ဒီနဲ့အီရန်​
​စောင်​​နေချိန်​မှာ အီရန်​ရဲ့စီးပွား​ရေးသုံးပုံနှစ်​ပုံဟာ က​သောင်းကနင်း ဖြစ်​ပြီး
အီရန်​လူထုရဲ့ ဆန္ဒပြမှုနဲ့ ဆက်​တိုက်​ကြုံ​နေရတယ်​.. အီရန်​သမ္မတက​တော့
​ရေနံတိုးထုတ်​မယ်​လို့ ခြိမ်း​ခြောက်​တာနဲ့ တက္ကဆပ်​ပြည်​နယ်​မှာ ​ရေနံထုတ်​မယ်​
ဆိုတဲ့ အ​မေရိကန်​ရဲ့တုံ့ပြန်​မှုဟာ ​ရေနံထုတ်​လုပ်​မှု တတိယအများဆုံးဖြစ်​တဲ့
အီရန်​နဲ့ အီရတ်​ထက်​ ပိုများမယ်​လို့ ဆိုတယ်​..။
ထရမ့်​ရဲ့ ခပ်​သွက်​သွက်​တုန့်​ပြန်​မှုဟာ ဒါနဲ့မရပ်​ပဲ ဇူလိုင်​လ​နှောင်းပိုင်းမှာ တရုတ်​ရဲ့သွင်းကုန်​ ဘီလျံ၂၀၀​ပေါ်မှာ အခွန်​၂၅%တိုး​ကောက်​တယ်​.. တရုတ်​ကလည်း
ဩဂုတ်​၄ရက်​နေ့မှာ အ​မေရိကန်​သွင်းကုန်​အမျိုးအစား ၅၀၀၀​ကျော်​က​နေ
ထရမ့်​ မကြာခင်​မှာ ကုန်​သွယ်​​ရေးစစ်​ပွဲကို ရပ်​ဆိုင်းဖို့ လုပ်​လိမ့်​မယ်​.. ကြာရင်​
နှစ်​ဖက်​စလုံး ထိခိုက်​လာနိုင်​မဲ့အ​နေအထားမှာ ထရမ့်​အ​နေနဲ့ အနိုင်​ရရင်​ ကစား
ဝိုင်းထဲကထတဲ့ ကစားသမားလို အနိုင်​ပိုင်းလိမ့်​မယ်​.. ထရမ့်​ကို ခန့်​မှန်းရင်​
က​ဘောက်​တိ က​ဘောက်​ချာ လုပ်​​နေသူ၊ ယမ်းဘီလူးလို့ ထင်​​နေကြ​ပေမယ့်​
သိပ်​လည်​တဲ့ စီးပွား​ရေးသမားပါ.. သူ​နောက်​မှာ အကြံ​ပေး​နေတာက သူရဲ့
သမက်​ ဂျူးလုပ်​ငန်းရှင်​ ဂျရက်​ကူရှနာရ်​..။ အိုင်​ဗန်​ကာထရမ့်​ရဲ့ ​ယောက်ျား..
တရုတ်​ရဲ့ စ​တော့​ဈေးကွက်​​တွေ၊ ယွမ်​​ငွေတန်​ဖိုးကျဆင်းလာတာ အ​ရေးမကြီး..
အဓိက တရုတ်​တို့ရဲ့ နှစ်​​ပေါင်း၂၀နီးပါး မြန်​မာပြည်​တွင်း​ရေးကို ချယ်​လှယ်​ပြီး
အမြတ်​ထုတ်​​နေတာ​တွေကို ပညာသားပါပါ လက်​တုံ့ပြန်​နိုင်​ဖို့ ကြိုးစားသူ​တွေက
စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာ​ရေးဒုဝန်​ကြီး ဦးဆက်​​အောင်​နဲ့ စီးပွား​ရေးအကြံ​ပေး ​ရှောင်​တာ
နဲလ်​တို့ပဲဖြစ်​တယ်​..။ ​မေလ၂၂ရက်​နေ့ စကာင်္ပူနိုင်​ငံမှာကျင်းပတဲ့ စီးပွား​ရေးဆိုင်​ရာဖိုရမ်​မှာ နိုင်​ငံ​တော်​အတိုင်​ပင်​ခံရဲ့ စီးပွား​ရေးအကြံ​ပေး မစ္စတာ​ရှောင်​တာ
နဲလ်​က ​ကျောက်​ဖြူSEZစီမံကိန်းတွင်​ အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ၇.၅ဘီလီယံ ရင်​နှီး
မြုပ်​နှံခြင်းသည်​ အစိုးရအ​နေဖြင့်​ တရုတ်​၏ အ​ကြွေး​ထောင်​​ချောက်​ထဲကျ
၂၀၁၅​ရွေး​ကောက်​ပွဲတွင်​ ရှုံးနိမ့်​သည့်​ ကြံ့ခိုင်​​ရေးအစိုးရ​ခေါင်း​ဆောင်​ ဦးသိန်းစိန်​
သည်​ အစိုးရတာဝန်​မလွှဲ​ပြောင်းမီ ၃လနှင့်​၃ရက်အလို၊ ပထမအကြိမ်​လွှတ်​​တော်​သက်​တမ်းကုန်​ဆုံးခါနီး ၃ရက်အလို ၂၀၁၅ခုနှစ်​ ဇန်​နဝါရီ၂၉ရက်တွင်​ တရုတ်​အ
စိုးရပိုင်​ CITICနှင့်​ သ​ဘောတူလက်​မှတ်​MOU​ရေးထိုးခဲ့သည်​..။ ​ကျောက်​ဖြူ​ရေ
နက်​ဆိပ်​ကမ်းစီမံကိန်းကနဦး သ​ဘောတူညီချက်​အရ တရုတ်​ပိုင်​CITICမှ ၈၅%ရရှိပြီး၊ မြန်​မာမှ ၁၅%ရရှိသည်​..။ တရုတ်​သည်​ အမျိုးသားစွမ်းအင်​လုံ
ခြုံ​ရေးအတွက်​ ၂၀၁၂ခုနှစ်​ ရှီကျင့်​ဖျင်​ တတ်​လာပြီးကတည်းက ရခိုင်​ကမ်း
တရုတ်​တို့ အ​ရှေ့တရုတ်​ပင်​လယ်​တွင်​ ဂျပန်​နှင့်​ ​ရေပိုင်​နက်​ဆိုင်​ရာ ပြဿနာ
တတ်​ပြီး၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်​တွင်​ ​တောင်​တရုတ်​ပင်​လယ်​ရှိ စပတ်​တလီကျွန်းကိစ္စနှင့်​
ဖိလစ်​ပိုင်​နိုင်​ငံသာမက အင်​ဒို၊ မ​လေးရှား၊ ဗီယက်​နမ်​နှင့်​ ဘရူးနိုင်းစသည့်​
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်​ (၅)နိုင်​ငံနှင့်​ ပြဿနာတတ်​ခဲ့သည်​..။ အ​ရှေ့အလယ်​ပိုင်း
နှင့်​အာဖရိကမှ လာသည့်​ ​ရေနံတင်​သ​ဘောင်္များသည်​ တရုတ်​နိုင်​ငံအ​ရှေ့ပိုင်း
ဆိပ်​ကမ်းမြို့များသို့ ဝင်​​ရောက်​ရန်​ ​တောင်​တရုတ်​ပင်​လယ်​ မလက္ကာ​ရေ
လက်​ကြားကို ဖြတ်​သန်းရသည်​.. အင်​ဒိုနှင့်​မ​လေးရှားနှစ်​နိုင်​ငံနယ်​စပ်​
ကြားကျဉ်း​မြောင်းသည့်​ ​ရေလက်​ကြားကို USအ​နေဖြင့်​ အ​ကြောင်းပြပြီး
ပိတ်​ပစ်​လိုက်​မှာကို တရုတ်​အ​နေဖြင့်​ စိုးရိမ်​ခဲ့သည်​..။
၂၀၁၃ခုနှစ်​ ဇွန်​လ၁၂ရက်မှာ ​ကျောက်​ဖြူ မ​ဒေးကျွန်းက​နေ တရုတ်​ပြည်​ယူနန်​
အထိ သွယ်​တန်းထားတဲ့ ကီလိုမီတာ ၄၇၉မိုင်​(၇၇၁)ကီလိုရှည်​လျားသည့်​ ဓာတ်​
ဓာတ်​​ငွေ့ပို့လွှတ်​မှု စတင်​ခဲ့သည်​..။ဓာတ်​​ငွေ့ပိုက်​လိုင်းနှင့်​အတူ ​ရေနံပိုက်​လိုင်းကို
၂၀၁၄ခုနှစ်​ ဩဂုတ်​လတွင်​ ပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၇​မေလ၂ရက်​နေ့တွင်​ ​ရေနံပို့လွှတ်​
ရခိုင်​​ကျောက်​ဖြူမှ တရုတ်​ ယူနန်​အထိ ပိုက်​လိုင်းဖြင့်​ ​ရေနံ ပို့​ဆောင်​ရခြင်းသည်​
အ​ရှေအလယ်​ပိုင်းမှ ​ရေနံတင်​သ​ဘောင်္များ ​တောင်​တရုတ်​ပင်​လယ်​ကို ဖြတ်​သန်း
ပြီး တရုတ်​အ​ရှေ့​မြောက်​ပိုင်း ဆိပ်​ကမ်းသို့ တင်​ပို့သည်​ထက်​ ​ရေမိုင်​၅၀၀၀ခန့်​
ချုံ့ပစ်​နိုင်​သည့်​အပြင်​ ကုန်​ကျစရိတ်​ကလည်း ထက်​ဝက်​ခန့်​သက်​သာသည်​..။
လုံခြုံ​ရေးအတွက်​ စိတ်​ပူစရာမလိုသည့်​အတွက်​ တရုတ်​တို့ ​ကျောက်​ဖြူ​ရေနက်​
ဆိပ်​ကမ်း စီမံကိန်းကြီးသာမက၊ ​ကျောက်​ဖြူ-ကူမင်​ရထားလမ်းပါ ​ဖောက်​လုပ်​
ဖို့ ၂၀၁၁ခုနှစ်​ ဧပြီလက ရထားပို့​ဆောင်​​ရေးဝန်​ကြီး​(ဟောင်း)ဦး​အောင်​မင်း၊
ဒုသမ္မတ(ထိုအချိန်​က) သီဟသူရတင်​​အောင်​မြင့်​ဦးတို့နှင့်​ တရုတ်​အစိုးရပိုင်​ CREC
(China Railway Engineering Corporation )တို့ သ​ဘောတူလက်​မှတ်​ ထိုးခဲ့
တရုတ်​နှင့်​စစ်​အစိုးရတို့ထိုးခဲ့သည့်​ သယံဇာတနှင့်​ စီမံကိန်းပ​ရော့ဂျတ်​များ ပွင့်​
လင်းမြင်​သာမှု မရှိသည့်​အချက်​​ပေါ်တွင်​ ပြည်​သူများ အထူးသတိမပြုမိ​​သော်​လည်း မြစ်​ဆုံ​ရေကာတာ ​ဆောက်​မည့်​ကိစ္စနှင့်​ပတ်​သတ်​၍ ပညာရှင်​များ၊ ပြည်​သူလူထုများက စိုးရိမ်​တကြီး ကန့်​ကွက်​မှုအ​ပေါ် ​ချွေးသိပ်​ရန်​ သမ္မတဦးသိန်းစိန်​သည်​ ၂၀၁၁စက်​တင်​ဘာတွင်​ မြစ်​ဆုံစီမံကိန်းကို ယာယီရပ်​ဆိုင်းခဲ့သည်​။ဖျက်​သိမ်း ခြင်းမပြုသည့်​ စစ်​အစိုးရနှင့်​ ရသမျှအကုန်​လိုချင်​သည့်​ တရုတ်​တို့၏ ​လောဘ​ဇောက​ကျောက်​ဖြူ​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်းနှင့်​ရထားလမ်း​ပေါ်တွင်​ အာရုံစိုက်​မှု​လျော့နည်းခဲ့သည်​.. တရုတ်​၏ "ကိုယ့်​ခြင်းထဲကကြက်​ ဘယ်​အချိန်​ရိုက်​သတ်​သတ်​"ဆိုသည့်​
စရိုက်​၊ ရသမျှလိုချင်​သည့်​စိတ်​ဓာတ်​​ကြောင့်​ မြစ်​ဆုံစီမံကိန်းအ​ပေါ် နည်းမျိုးစုံ
ဖြင့်​ အ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​ရန်​ကြိုးစားမှုသည်​ ​ကျောက်​ဖြူ​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်း
NLDအစိုးရအ​နေဖြင့်​ ၂၀၁၆ခုနှစ်​တွင်​ အစိုးရတာဝန်​ယူပြီး​နောက်​ ​ကျောက်​ဖြူ
​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်း ပ​ရောဂျက်​ကို ပြန်​လည်​ကိုင်​ခဲ့သည်​..။ ကနဦး MoUလက်​မှတ်​
ထိုးမှုအရ တရုတ်​ပိုင်​CITICက ၈၅%ပိုင်​ဆိုင်​ပြီး၊ မြန်​မာဘက်​မှ ၁၅%သာ ပိုင်​
ဆိုင်​သည်​.. ​ကျောက်​ဖြူ​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်းကို US$ ၇.၅ ဘီလီယံကုန်​ကျမည်​
ဖြစ်​ပြီး၊ ​ကျောက်​ဖြူစီးပွား​ရေးဇုန်​ပါဆိုလျှင်​ US$၁၀ဘီလီယံထိ ကုန်​ကျမည်​
ဟု တွက်​ချက်​ထားသည်​.. လက်​ရှိအစိုးရအ​နေဖြင့်​ ​ကျောက်​ဖြူSEZနှင့်​ ညှိနှိုင်း
မှု အကြိမ်​ကြိမ်​လုပ်​ခဲ့ပြီး CITICမှ ၇၀%၊ မြန်​မာဘက်​မှ ၃၀% အချိုးပိုင်​ဆိုင်​
ထို​နေရာတွင်​ တရုတ်​ဖက်​မှ မြန်​မာအစိုးရအတွက်​ စိုက်​ထုတ်​မည့်​ US$၂ဘီလီယံ
​ကျော်​ ၃ဘီလီယံနီးပါးခန့်​ကို တရုတ်​၏ သွင်းကုန်​ ထုတ်​ကုန်​ဘဏ်​မှ ​ချေး​ငွေ ယူ
ရမည်​ဖြစ်​သည်​.. ထိုအချက်​ကို ​ရှောင်​တာနဲလ်​က သီရိလကာင်္ ဟန်​ဘန်​တိုတန်​ဆိပ်​
ကမ်းလို ​ချေး​ငွေလည်​ပင်းနစ်​ပြီး တရုတ်​သို့ နှစ်​ရှည်​၉၉နှစ်​ကြာ ထိုးအပ်​ လိုက်​ရ
ခြင်းကို လက်​ညိုးထိုးပြခဲ့သည်​.. ထိုမျှသာမက အာဖရိက ​ဂျေဘူတီဆိပ်​ကမ်း၊
ပါကစ္စတန်​ ဂွာဒါဆိပ်​ကမ်းလိုမျိုး တရုတ်​တို့၏ ​လည်​ပင်းမြုပ်​မ
တတ်​ ​ချေး​ငွေ၊အတိုးဝန်​ပိပြီး ထိုးအပ်​​နေရသည့်​ အဖြစ်​မျိုးကို လက်​ညိုးထိုးပြီး
မြန်​မာအစိုးရ​ပေါ် သတိ​ပေးခဲ့သည်​..။ ယခင်​စစ်​အစိုးရလက်​ထက်​ တွင်း-၃ ဗိုလ်​
ချုပ်​ကြီးဝင်းမြင့်​လက်​ထက်​တွင်​ လယ်​ယာစိုက်​ပျိုး​ရေးကဏ္ဍအတွက်​ တရုတ်​
တို့က သယံဇာတကို ယူ၊ လယ်​ယာစက်​ပစ္စည်းများကို မြန်​မာကိုတင်​သွင်းပြီး
​နောက်​ဆုံး၌ ​ကြွေးမြီတင်​သွားသည်​မှာ US$ ၂ဘီလီယံနီးပါးရှိခဲ့သည်​..။ အဓိက
အတိုးနှုန်းမှာ ​ကြောက်​ခမန်းလိလိ ၇%ဖြစ်​သည်​..။
နိုင်​ငံခြား​ကြွေးမြီ US$၁၁ဘီလီယံ ရှိသည့်​အနက်​ တရုတ်​သို့ ပြန်​ဆပ်​ရမည့်​
​ကြွေးမြီမှာ US$၄.၂ဘီလီယံ ဖြစ်​ပြီး အများဆုံးဖြစ်​သည်​.. အတိုး​ပေါ် အတိုး
ဆင့်​ပြီး အတိုးနှုန်းမြင့်​သည့်​ တရုတ်​​ချေး​ငွေကို သတိပြုရမည့်​အချက်​ပင်​..
၂၀၁၈ ဇူလိုင်​လ​နှောင်းပိုင်းတွင်​ တရုတ်​အစိုးရအာ​ဘော်​သတင်းစာမှ
မြန်​မာတို့အ​နေဖြင့်​ တရုတ်​နှင့်​ ခပ်​ကွာကွာ​နေလျှင်​ ဆိုးကျိုးရှိလာနိုင်​
​ကြောင်း သတိ​ပေးခဲ့သည်​..။ ဇူလိုင်​လ၂၈ရက်​တွင်​ စီမံကိန်းနှင့်​ ဘဏ္ဍာ​ရေး
ဒုဝန်​ကြီးဦးဆက်​​အောင်​သည်​ ​ကျောက်​ဖြူSEZစီမံကိန်း ​ကော်​မတီဥက္ကဌ
အဖြစ်​ တာဝန်​ယူမည်​ဖြစ်​ပြီး၊ အစိုးရအတွက်​ အ​ကြွေးနွံထဲ မကျ​အောင်​
လုပ်​​ဆောင်​သွားမည်​ ဖြစ်​​ကြောင်း​ပြောဆိုခဲ့သည်​..။ သီလဝါSEZစီမံကိန်း
မှာ ​အောင်​မြင်​မှုရထားတဲ့ ဦးဆက်​​အောင်​အ​နေဖြင့်​ အ​တွေ့အကြုံအများကြီး
ရှိထားသူဖြစ်​သည်​..။ ASEAN နိုင်​ငံအတွင်းက နိုင်​ငံအချို့မှာ SEZ Policy
Master Plan​တွေ ​ရေးဆွဲဖူးတဲ့ ဦးဆက်​​အောင်​အ​နေနဲ့ နိုင်​ငံ(၇)နိုင်​ငံမှာ SEZ
Demand နဲ့ပတ်​သတ်​တဲ့ Survey ​တွေကို ​ရေးဆွဲဖူးတယ်​..
​ကျောက်​ဖြူ SEZကို US$1.3ဘီလီယံနဲ့ စတင်​မယ်​ဆို​တော့ အားလုံး အံ့အားသင့်​
ကြတယ်​..အရင်​ညှိနှိုင်းသလို ၉ဘီလီယံ၊၁၀ဘီလီယံ စီမံကိန်းအကြီးစားမျိုး
မဟုတ်​​တော့ဘူး...။ ဒါ​ပေမယ့်​ တချို့က တရုတ်​အ​နေနဲ့ လက်​ခံမှာ မဟုတ်​ဘူး
လို့ ငြင်းချက်​ထုတ်​ကြတယ်​.. ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီ​နေရာမှာ လက်​ရှိအစိုးရရဲ့ ပါးနပ်​မှု
ကို ​တွေ့လိုက်​ရတယ်​.. စီမံကိန်းကို Section ခွဲလိုက်​တယ်​.. Phase1,2,3ဆိုပြီး
သ​ဘောတူညီချက်​အရ စီမံကိန်းဟာ Supply-based ဆိုတာထက်​ Demand-based အဖြစ်​ အ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​မယ်​..
*စီမံကိန်းကို တိုးချဲ့ခြင်​သလို တိုးချဲ့ခွင့်​မရပဲ လုံ​လောက်​တဲ့ Demandရှိမှ တိုးချဲ့
ရမှာဖြစ်​ပြီး စီမံကိန်းက ရတဲ့ဝင်​​ငွေဟာ Total Operation Costကို ပြည့်​မှီမှ
တိုးချဲ့ခွင့်​ပြုဖို့ သ​ဘောတူထားပြီး ဖြစ်​တယ်​..။ ဒါ​ကြောင့်​ စီမံကိန်းအကြီးကြီး
​ဆောက်​ပြီး အ​ကြွေးနွံနစ်​စရာ အ​ကြောင်းမရှိဘူး..။
(၁) စီမံကိန်းကို Phase-1 အ​နေနဲ့ စီမံကိန်းအ​သေးစား (သို့မဟုတ်​) အလတ်​စား
အ​နေနဲ့ စမှာပါ..US$ ၁.၃ဘီလီယံနဲ့ စမှာဆို​တော့ CITICက US$သန်း၉၁၀၊
မြန်​မာဖက်​က US$သန်း၃၉၀ စိုက်​ထုတ်​ရမှာ ဖြစ်​တယ်။
(၂) Phase1က​နေ Phase 2,3ကို တိုးချဲ့တဲ့​နေရာမှာလည်း Phase1ရဲ့ Operating
Capacity ရဲ့ ဘယ်​​လောက်​ရာခိုင်​နှုန်းပြည့်​မှ Phase2ကို တိုးချဲ့ခွင့်​ရမယ်​။
Phase1 Operationက ရတဲ့ဝင်​​ငွေက Total operation costကို ကာမိမှ
Phase-2ကို တိုးချဲ့ခွင့်​​ပေးမယ်​ဆိုတဲ့ သက်​မှတ်​ချက်​​တွေကို သ​ဘောတူထားတယ်​..
(၃) စီမံကိန်း​ချေး​ငွေဟာလည်း ပုဂ္ဂလိက​ချေး​ငွေဖြစ်​ဖို့၊ နိုင်​ငံ​တော်​အ​နေနဲ့ လုံးဝ
မ​ချေးဖို့နဲ့ ​ချေး​ငွေအာမခံကိုလည်း နိုင်​ငံ​တော်​က လုံးဝ​ပေးစရာမလိုဘူးလို့ သ
​နောက်​ပြီး ညှိနှိုင်းမှု​တွေကိုလည်း Formal Meeting, Informal Meeting
လုပ်​ခဲ့တယ်​..။ ညှိနှိုင်းမှု​တွေမှာ သ​ဘောတူထားတဲ့အချက်​အားလုံးကို Framework
Agreement မှာ ထည့်​​ရေးပြီးဖြစ်​တယ်​..။ Framework Agreement လက်​မှတ်​
ထိုးပြီးတာနဲ့ အတည်​ဖြစ်​ပြီး..။ အရင်​က ညှိနှိုင်းခဲ့ရာမှာ အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​ကြောင့်​ ခက်​ခဲကြန့်​ကြာမှု​တွေရှိခဲ့တယ်​..။ အဓိက Principles ၅ခု​ပေါ် အ​ခြေခံပြီး
ညှိနှိုင်းကြမယ်​ဆိုတဲ့ သ​ဘောတူညီချက်​ယူပြီးမှ ညှိနှိုင်းခဲ့တာပါ..ယ
၁။ ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာ အတတ်​နိုင်​ဆုံး Flexibleဖြစ်​ဖို့နဲ့ ညှိနှိုင်းတဲ့အချက်​​တွေက
ဘယ်​အစိုးရအ​ပေါ်မှာမှ(အထူးသဖြင့်​ မြန်​မာအစိုးရအ​ပေါ်) ဝန်​ထုပ်​ဝန်​ပိုး မဖြစ်​
၂။ ညှိနှိုင်းတဲ့အချက်​​တွေအားလုံး နိုင်​ငံတကာစံနှုန်း​တွေအ​ပေါ်မှာ အ​ခြေခံဖို့..။
၃။ အရင်​ညှိနှိုင်းမှု​တွေကို ​ပြောင်းလဲသင့်​ရင်​ ရဲရဲ​ပြောင်းလဲဖို့..။
၄။ တင်​ဒါ​ခေါ်စဉ်​ကတည်းက အဆိုပြု​တောင်းခံလွှာ(Request for Proposal)
မှာ ပါရှိတဲ့ အချက်​​တွေကို တတ်​နိုင်​သမျှ ​သွေမဖယ်​ဖို့..။
၅။ မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ဥပ​ဒေများအတိုင်း ဖြစ်​​စေဖို့ဆိုတဲ့ Principles ​တွေကို လိုက်​နာ
ပြီး ညှိနှိုင်းပါ့မယ်​လို့ သ​ဘောတူညီချက်​ရယူပြီးမှ ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်​..။
ညှိနှိုင်းသ​ဘောတူညီချက်​အရ၊ စီမံကိန်းကို Phaseလိုက်​ သွားမှာဖြစ်​ပြီး၊ ပထမ
အဆင့်​စီမံကိန်းက​နေ လည်​ပတ်​​ငွေ ကာမိမှ ဒုတိယပိုင်းအဆင့်​စီမံကိန်းကို သွား
မှာ ဖြစ်​တဲ့အတွက်​ နိုင်​ငံ​တော်​အစိုးရအ​နေနဲ့ အ​ကြွေးနွံနစ်​စရာ မရှိဘူး..။
မြန်​မာနိုင်​ငံအ​နေနဲ့ တရုတ်​ရဲ့ One Belt, One Road Initiative ရဲ့ မဟာဗျူ
ဟာကျတဲ့ ​နေရာမှာရှိတယ်​..။ Myanmar-China Economic Corridor MoU
ကိုလည်း ဒီနှစ်​မကုန်​ခင်​ လက်​မှတ်​​ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်​..။ တရုတ်​နိုင်​ငံလို အင်​အား
ကြီးနိုင်​ငံရဲ့စီမံကိန်း​တွေ ဝင်​လာတဲ့အခါမှာ စီးပွား​ရေး​သေးငယ်​တဲ့၊ဘဏ္ဍာ​ရေး
အရ အင်​အားမရှိတဲ့ မြန်​မာနိုင်​ငံအ​နေနဲ့ အရင်​စစ်​အစိုးရလက်​ထက်​တုန်းက
​နေ ယခုထိတိုင်​ ခံစား​နေရတုန်းပဲ..။ အဓိက စစ်​အစိုးရရဲ့ တံခါးပိတ်​​ခေါင်းခါ
မူဝါဒ၊ သယံဇာတကို ​ရောင်းစားပြီး တရုတ်​​ပေါ်မှီခိုအားထား​နေရတာ၊ တရုတ်​ရဲ့
မီးစတစ်​ဖက်​၊ ​ရေမှုတ်​တစ်​ဖက်​ (double-edge policy) ကြားမှာ နိုင်​ငံဟာ
လက်​ရှိအစိုးရလက်​ထက်​မှာ တရုတ်​​တွေရဲ့ ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းက​နေ အသုံး
ချတတ်​ဖို့ ၊ ပါးနပ်​ရင်​ နိုင်​ငံ​တော်​ရဲ့ စီမံကိန်း​တွေကို အ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​
နိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​..။အသုံးမချတတ်​ရင်​သာ ရှုပ်​​ထွေးမှု​တွေရှိလာနိုင်​ပါတယ်​။
အဓိက​တော့ ကိုယ့်​နိုင်​ငံအတွက်​ အမှန်​တကယ်​လိုအပ်​တဲ့ စီမံကိန်း​တွေကို
အမှန်​တကယ်​လိုအပ်​တဲ့အရွယ်​အစားနဲ့ ကျွမ်းကျင်​စွာအသုံးချ (Cost Efficiency )
တတ်​မယ်​ဆိုရင်​ Win-Win Situation ကို ရရှိမှာပါ..။ OBOR Initiative ကို
အသုံးချနိုင်​ရင်​ စီးပွား​ရေးအရ ​သေးငယ်​ပြီး၊ ဘဏ္ဍာ​ရေးအရ အင်​အားမရှိတဲ့
ကျ​နော်​တို့ နိုင်​ငံအတွက်​ အကျိုးရှိနိုင်​ပါလိမ့်​မယ်​..။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ​ရေးနှစ်​အတွက်​ ကာကွယ်​​ရေးဘတ်​ဂျတ်​ကို ကျပ်​ ၃၂၅၀
ဘီလီယံအထိ ​တောင်းခံခဲ့တယ်​.. အာဆီယံနိုင်​ငံအ​နေနဲ့ ​ပြောရင်​ US$၂ဘီလီယံ
​ကျော်​​ကျော်​သာ ရှိတဲ့အတွက်​ လာအို၊ က​မ္ဘောဒီးယားထက်​ပဲများတယ်​..။ ​တောင်း
ခံသင့်​တဲ့ ပမာဏမှန်​​ပေမယ့်​၊ ​ငွေလုံး​ငွေရင်းအသုံးစရိတ်​သာ ​ဖော်​ပြပြီး နိုင်​ငဲ​တော်​
စာရင်းစစ်​ချုပ်​ရုံးက စစ်​​ဆေးခွင့်​မရှိဘူး..။ နိုင်​ငံရဲ့ ဘတ်​ဂျတ်​​တွေထဲမှာ အမြင့်​ဆုံး
ဖြစ်​တဲ့ ကာကွယ်​​ရေးဘတ်​ဂျတ်​ကို စစ်​​ဆေးခွင့်​ မရှိတာ ဘယ်​လိုမှ ဒီမိုက​ရေစီစံ
ဒီထက်​ပိုဆိုးတာက တပ်​ပိုင်​စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်း​တွေ (အဓိက -MEHL(မြန်​မာ့ဦး
ပိုင်​) )ရဲ့ အခွန်​​တွေ၊ ဓာတ်​သတ္တုခွန်​​တွေကို နိုင်​ငံ​ဘဏ္ဍာ​တော်​ထဲကို မဝင်​​သေး
ဘူး.. သယံဇာတနဲ့ စွမ်းအင်​ကဏ္ဍ​တွေ၊ စီမံကိန်း​တွေ ယခင်​စစ်​အစိုးရ၊ ဦးသိန်း
စိန်​အစိုးရအ​နေနဲ့ စာချုပ်​​ပေါင်းများစွာ အဓိက တရုတ်​ပိုင်​စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်း
​တွေနဲ့ လက်​မှတ်​ထိုးခဲ့တယ်​.. သဘာဝဓာတ်​​ငွေ့ဆိုလည်း MOGE​အောက်​က
မြစ်​ဆုံ​ရေအားလျှပ်​စစ်​စီမံကိန်းဆိုရင်​လည်း လျှပ်​စစ်​စွမ်းအင်​၊ လက်​ပံ
​တောင်း​တောင်​ ​ကြေးနီစီမံကိန်း၊ တ​ကောင်းနီကယ်​စီမံကိန်း အစရှိသည်​ဖြင့်​
လက်​မှတ်​MoU​ပေါင်းများစွာ ထိုးခဲ့တယ်​.. စစ်​အစိုးရနဲ့ တရုတ်​ပိုင်​ကုမ္ပဏီ​တွေ
လက်​မှတ်​​ရေးထိုးပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ ဦးပိုင်​အခန်းကဏ္ဍစပါတယ်​..။ လက်​မှတ်​
ထိုးခအပြင်​ နိုင်​ငံတကာစံနှုန်းအရ မြန်​မာက ၅၅%က​နေ ၈၅%ထိ ရတယ်​..
ဒီအ​ပေါ်က​နေ နိုင်​ငံအတွက်​ ၁၀%၊ ၁၅% သာချန်​ပြီး အနည်းဆုံး ၄၅%၊၇၅%
အထိ နှစ်​၂၀က​နေ၊ နှစ်​၃၀ထိ ပုံတိုက်​​ရောင်းချပါတယ်​..။
ဖားကန့်​​ကျောက်​စိမ်းလုပ်​ကွက်​၊ တနိုင်း​ရွှေလုပ်​ကွက်​ဆိုရင်​ ဦးပိုင်​နဲ့ ပါတနာ
ခရိုနီ​တွေ၊ ဘိန်းရာဇာ​တွေ အလျဉ်းသင့်​သလို လုပ်​စားတယ်​.. On paper ​ပေါ်
မှာ ပြထားသ​လောက်​ပဲ နိုင်​ငံ​တော်​ဘဏ္ဍာထဲဝင်​တယ်​.. သဘာဝဓာတ်​​ငွေ့
​ဒေါ်လာ၁သိန်းဖိုး ​ရောင်းရတယ်​ဆိုရင်​ ကျပ်​၆သိန်းခွဲသာ နိုင်​ငံ​တော်​ဘဏ္ဍာထဲ
ဝင်​ပြီး၊ တကယ့်​​ပေါက်​​ဈေးတန်​ဖိုး အ​မေရိကန်​၁​ဒေါ်လာ -မြန်​မာကျပ်​ ၁၀၀၀ခန့်​
ပဲထား ၉၉၃ကျပ်​ကို အသားတင်​ရတယ်​... ဒီအဖွဲ့အစည်းမှ မချမ်းသာရင်​
ဘယ်​ရှိ​တော့မလဲ.. မြန်​မာ့စီးပွား​ရေးဦးပိုင်​လီမိတတ်​(MEHL)အ​နေနဲ့ တနှစ်​
သန်း​ပေါင်း၃၉၀ မြတ်​စွန်းပြီး၊ ပိုင်​ဆိုင်​မှုတန်​ဖိုး US$၈၀ဘီလီယံပိုင်​ဆိုင်​တယ်​..။
ဒါကို ကာကွယ်​​ရေးဘတ်​ဂျတ်​အ​နေနဲ့ တခြားနိုင်​ငံထက်​စာရင်​ နည်းတယ်​လို့
​ပြောထွက်​တဲ့ပါးစပ်​ ပိတ်​သာရိုက်​ဖို့ ​ကောင်းသည်​.. စာရင်း​တောင်​ စစ်​ခွင့်​မရှိတဲ့
ကာကွယ်​​ရေးဘတ်​ဂျတ်​ကို ​ပေးရလို့ထား၊ တိုင်းပြည်​ရဲ့ သယံဇာတ၊ ဘဏ္ဍာ​တော်​​တွေကို ဘုံး​နေတဲ့ တပ်​မ​တော်​ပိုင်​ စီးပွား​ရေး မြန်​မာ့ဦးပိုင်​(MEHL)ရဲ့ အမြတ်​​ငွေ​တွေကို နိုင်​ငံ​တော်​ဘဏ္ဍာ​တော်​ထဲကို သွင်းရင်​ ထိုင်းထက်​၊ မ​လေး၊အင်​ဒိုထက်​
များတဲ့ ကာကွယ်​​ရေးဘတ်​ဂျတ်​ကို ချ​ပေးမယ်​..။ ဒီထဲက အဆင့်​(က)ရှယ်​ယာ
လို့​ခေါ်တဲ့ ကာကွယ်​​ရေးဝန်​ကြီးဌာနရဲ့ စစ်​လက်​နက်​ဝယ်​ယူစု​ဆောင်း​ရေးဌာန
ကို ​ရောက်​သွားတဲ့ အစုရှယ်​ယာ၄၀%ကို out of date​တွေ ဝယ်​ပြီး စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​
ကြီး​တွေရဲ့ ကိုယ်​ပိုင်​ဘဏ်​တိုက်​ထဲ ဝင်​သွားတာကို မသိကြ​သေးလို့​ပေါ့..။
​လော​လောဆယ်​ အစိုးရနဲ့ ပြည်​သူ​တွေ ဘာမှ မလုပ်​နိုင်​​သေးတာ မှန်​တယ်​.. ​ကျောက်​
ဖြူစီမံကိန်းက​နေစပြီး တရုတ်​တို့ ပိုက်​​ဘောမိလာတဲ့အ​ခြေအ​နေကို ရှီကျင့်​ဖျင်​အ​နေနဲ့ ခွင့်​လွှတ်​မှာ​တော့မဟုတ်​ဘူး.. စစ်​အာဏာရှင်​​တွေကို ပစ်​မှတ်​ထားမှာပဲ..၂၀၁၈ခုနှစ်​ ဧပြီ၂၀မှာ ဦးသိန်းစိန်​ တရုတ်​သွားတာ "တာ​ကော"အ​ပေါ် ကတိ​ပေးတာ မတည်​ရင်​
​သေဖို့သာပြင်​ထား.. အခုအစိုးရအ​ပေါ် မျက်​နှာချို​သွေးပြီး "အိပ်​နှိုက်​၊ ​ပြောင်​ကြီး၊
​ကြောင်​ချီးတစ်​သိုက်​"ကို မရှင်းဘူးလို့ မ​ပြောနိုင်​ဘူး..။
​ကျောက်​ဖြူSEZအတွက်​ Bravoပါ ဦးဆက်​​အောင်​...။
ဒီ၂၀၁၈နှစ်​ကုန်​မှာ ထားဝယ်​​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်းကို အပြီးသတ်​လက်​မှတ်​ထိုးကြ
ဖို့ရှိပါတယ်​..။ မြန်​မာနဲ့ ထိုင်းအစိုးရကြား ထားဝယ်​​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်းစီမံကိန်း
နဲ့အတူ အထူးစီးပွား​ရေးဇုန်​တည်​​ဆောက်​ဖို့ ၂၀၀၈ခုနှစ်​ ​မေလမှာ MoU ​ရေး
ထိုးပြီး၊ ဒီစီမံကိန်းကို ​ဆောက်​လုပ်​ဖို့ ကန်​ထရိုက်​ရခဲ့တဲ့ (Italian Thai Development -ITD)ကုမ္ပဏီဦး​ဆောင်​ပြီး၊ ၂၀၁၁ခုနှစ်​မှာ စီမံကိန်းကို အ​ကောင်​
လယ်​ပိုင်​ရှင်​​တွေကို ​လျော်​​ကြေး​ပေးရတဲ့ပမာဏ US$၃၃သန်း ထင်​ထားတာထက်​
များတဲ့အပြင်​၊ အများအပြားရင်းနှီးမြုပ်​နှံမှု မလာတဲ့အတွက်​ ၂၀၁၃ခုနှစ်​မှာ
ရပ်​ဆိုင်းထားခဲ့ရတယ်​..။ အမှန်​တကယ်​ စီမံကိန်းပြီးရင်​ ထားဝယ်​SEZဟာ
အ​ရှေ့​တောင်​အာရှအတွင်း အကြီးဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်​ပါတယ်​..။ ​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်း
နဲ့ စီးပွား​ရေးဇုံဧက ၄၈၀၀၀​ကျော်​ရှိတဲ့အပြင်​၊ ရှည်​လျားတဲ့ ကမ်းရိုးတန်း၊
တနသာင်္ရီ​ဒေသမှာ သဘာဝ​ဘေးအန္တရာယ်​၊ ဘာသာ​ရေးပဋိပက္ခမရှိဘူး..
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ​ဒေသဖြစ်​တဲ့အပြင်​ ထိုင်း၊ မ​လေးရှား၊ စကာင်္ပူနဲ့ အနီးဆုံး တိုင်း
မူလက ခန့်​မှန်းတွက်​ချက်​ထားတဲ့ US$၈.၆ ဘီလီယံ အကုန်​အကျခံမယ့်​ စီမံကိန်း
ဟာ ၂၀၁၃ခုနှစ်​မှာ ရပ်​ဆိုင်းခဲ့တယ်​..။ အ​ကြောင်းရင်းက ရင်းနှီးမြုပ်​နှံမှု (investment) ​ကြောင့်​တစ်​ခုတည်း​တော့ မဟုတ်​ဘူး..လယ်​သမား​တွေ ​လျော်​
​ကြေး​ပေးရတာ၊ ​ဒေသခံပြည်​သူ​တွေ ကန့်​ကွက်​ရတာ၊ ထိုင်းဘက်​က ​ကျောက်​မီး
​သွေးလျှပ်​စစ်​ဓာတ်​အား​ပေးစက်​ရုံ ​ဆောက်​တာ တစ်​ခုတည်းတင်​မဟုတ်​ဘူး..။
ဒီပြဿနာမှာ မြန်​မာပြည်​ရဲ့ ထိပ်​တန်းခရိုနီအား​ကောင်းဆုံး၊ လုပ်​ငန်းအကြီးဆုံး
Asia World ပါဝင်​ပတ်​သတ်​​နေတယ်​..။
သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်​ ပဲခူး​ရေ​ဘေးသွားတုန်းက ဝန်​ကြီးချုပ်​ဦးဝင်းသိန်းကို
အလုပ်​လုပ်​တာ နှုတ်​မကျွံဖို့ သတိ​ပေးခဲ့တာ ဟံသာဝတီ​လေဆိပ်​​ကြောင့်​ပဲ..။
ဟံသာဝတီ​လေဆိပ်​ကို တင်​ဒါရတာလည်း Asia world ပဲ..။ အရှုံး​ပေါ်လို့ ပြန်​
အပ်​တဲ့အပြင်​ ​နောက်​တင်​ဒါတစ်​ခုကိုပါ ရခဲ့တဲ့ စတီဗင်​​လော(ခ) ထွန်းမြင့်​နိုင်​
ဆိုတာ ကိုးကန့်​ဘိန်းရာဇာ ​လောစစ်​ဟန်​ရဲ့ သားပါ..။ ၁၉၈၉ခုနှစ်​ ဗမာပြည်​
ကွန်​မြူနစ်​ပါတီကွဲထွက်​ပြီး ဝ"၊ ကိုးကန့်​စတဲ့ အဖွဲ​တွေ့ဟာ စစ်​အစိုးရနဲ့ ပလဲ
နံသင့်​ပြီး အကျိုးတူစီးပွား​ပေါင်းလုပ်​ခဲ့တယ်​..။ စစ်​ဗိုလ်​ချုပ်​​တွေနဲ့ ဦးပိုင်​နဲ့
​ပေါင်းပြီး၊ ထူး၊ ​ရွှေ​တောင်​၊ ​ရွှေသံလွင်​စတဲ့ ခရိုနီကြီး​တွေနဲ့​ပေါင်းပြီး မြန်​မာပြည်​စီးပွား​ရေးရဲ့ ၇၅%ကို ထိန်းချုပ်​ထားတယ်​..။
*ထားဝယ်​SEZ စီမံကိန်းဟာ စကာင်္ပူကို အနာဂတ်​မှာ တိုက်​ရိုက်​ထိလာနိုင်​တယ်​..
ဒါ​ကြောင့်​ Max Myanmar​ဇော်​​ဇော်​ကို ထားဝယ်​SEZက​နေ ပထုတ်​တာ၊ စကာင်္ပူ
မှာ ကွန်​ဒိုတိုက်​ခန်း​တွေနဲ့ လာဘ်​ထိုးတာ၊ Foreign Investment မဝင်​​အောင်​
နည်းမျိုးစုံနဲ့တားဆီးတယ်​.. ထွန်းမြင့်​နိုင်​ရဲ့ဇနီး စကာင်္ပူသူ စီစီလီယာအန်းဟာ
*​ရွှေသဘာဝဓာတ်​​ငွေ့ ​ရောင်းချရတဲ့ ဝင်​​ငွေ MOGEက​နေ ဦးပိုင်​ထဲဝင်​၊
စကာင်္ပူဘဏ်​ဖြစ်​တဲ့ OCBCနဲ့ DBSဘဏ်​​တွေမှာ အပ်​နှံထားတာ Asia World
*​ကျောက်​ဖြူSEZမှာ Asia world ၅%ပါ..၂၀၁၅ခုနှစ်​ ဒီဇင်​ဘာ၂၉ရက် သ​ဘော
တူညီချက်​၊ မြစ်​ဆုံစီမံကိန်းမှာလည်း မြန်​မာအစိုးရက​နေ ၅%ယူထား..တရုတ်​
*ဒလတံတားစီမံကိန်းမဖြစ်​တာ Asia world ကန့်​ကွက်​​နေလို့၊ ရန်​ကုန်​ဆိပ်​ကမ်း
တစ်​​လျှောက်​မှာ Asia world ပဲ လက်​ဝါးကြီးအုပ်​ထား..သီလဝါSEZ ​ပေါ်လာ
လို့ အခက်​​တွေ့ချိန်​ ဒလတံတားကိစ္စက အလုံ ဆင်​မင်းဆိပ်​ကမ်းအားလုံး ရပ်​တန်​ဖို့
ထားဝယ်​​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်းပြီးရင်​ စကာင်္ပူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆုတ်​ယုတ်​စပြုမယ်​..
ထားဝယ်​SEZဟာ အ​ရှေ့​တောင်​အာရှရဲ့ တကယ့်​ခရီးသွားလမ်းမကြီး​ပေါ်မှာ ရှိ
တဲ့အတွက်​ ဒီPortကြီး​အောင်​မြင်​ရင်​ မြန်​မာ့စီးပွား​ရေး ကျိန်း​သေဖွံ့ဖြိုးပြီး..
ဒီခုမှ စကာင်္ပူ စိုးရိမ်​​နေ​တာမဟုတ်​ဘူး..
​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ စီးပွား​ရေးမူဝါဒ ၁၂ချက်​ချတဲ့အချိန်​မှာ ​ပြောခဲ့တာရှိတယ်​..
​နောင်​၁၅နှစ်​ကြာရင်​ စကာင်္ပူကို လိုက်​မှီ​အောင်​ကြိုးစားမယ်​လို့ ​ပြောခဲ့တယ်​..
Crony​တွေ, Tycoon ​တွေ ရယ်​သွမ်း​သွေးခဲ့တာ​ပေါ့...
နိုင်​ငံ​တော်​အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​ ရည်​ညွှန်းခဲ့တာက ထားဝယ်​​ရေနက်​ဆိပ်​ကမ်း...
လီရှန်​လွန်း၊ စီစီလီယာအန်းနဲ့ စတီဗင်​​လောတို့က​တော့ စိုးတထိတ်​ထိ်​တ်​
​ကျောက်​ဖြူ SEZက စိန့်​(​ပေါက်​​ဖော်​)တို့ရဲ့ သံကျပ်​ကာ အင်္ကျီ​အောက်​ ပြဲဟ​နေတဲ့ ချိုင်းကြား ချုပ်​ရိုး ဆိုတာ...
Labels:အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း သတင်း/ဆောင်းပါး
“ မင်မိုရီထဲကမြိတ်၈၈ နေ့စွဲတချို့” စိုးငယ်
ဒီတစ်ပတ် မားဂွီးပို့စ်ဂျာနယ်မှာရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးပါ။မှတ်မိတချို့မေ့တချို့ ဖြစ်နေတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၃၀က အဖြစ်အပျက်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ပြန်စဉ်းစားပြီး ရေးခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် အချက်အလက်တချို့ ကွဲလွဲမှု ရှိကောင်း ရှိနိုင်တယ်။
ရည်ရွယ်ချက်က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀က စီးပွားရေးကလွဲလို့ ဘာမှ စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ ထင်မှတ်နေကြတဲ့၊ မြိတ်ဆိုတဲ့ မြို့လေးမှာ “အဖြူအစိမ်းဝတ်”အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေ ဦးဆောင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးတာ ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်လေးတွေ သိစေချင်လို့ပါ။
“ မင်မိုရီထဲကမြိတ်၈၈ နေ့စွဲတချို့”
လူသားတိုင်း ဘ၀မှာ အမှတ်တရနေ့လေးတွေ ကိုယ်စီ ရှိတတ်ကြလေသည်။ တချို့က ဆယ်တန်းအောင်သော နေ့ကို တစ်သက်တာ အမှတ်ရ နေတတ်ကြလေသည်။ တချို့က အိမ်ထောင်ကျသောနေ့ကို အမှတ်ရ နေတတ်ကြသလို တချို့က ထောင်ကလွတ်သော နေ့ကို အမှတ်ရနေတတ်ကြလေသည်။ ခေါင်းစဉ်သာ ကွဲပြားခြားနားပေမဲ့ လူသားတိုင်း ဘ၀မှာ အမှတ်တရ နေ့လေးတွေ ကိုယ်စီ ရှိတတ်ကြစမြဲပင်။ထိုနည်းတူစွာ ကျွန်တော့်မှာလည်း တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်စရာ အမှတ်တရ နေ့လေးတစ်နေ့ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုနေ့ကား အသက်ကို ဖက်နှင့်ထုပ်ပြီး ပြေးခဲ့ရသောနေ့ (သို့မဟုတ်) ၈ရက်၊ ၈လ၊ ၁၉၈၈။
ထိုအချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်အသက်က ၁၈နှစ်။ အကယ်၍ ကိုးတန်းတစ်နှစ်၊ဆယ်တန်းနှစ် နှစ်သာ မကျခဲ့ပါက ထိုနှစ်မှာ ကျွန်တော်သည် ကံ့ကော်တောက အချောအလှလေးတွေကြားမှာ ပျော်မောကြီး မောရော့မည်။ အကယ်၍ ကံကောင်း ထောက်မပြီး ချစ်သူလေးတစ်ယောက် ရရှိခဲ့ပါက အင်းလျားကန်ကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသော လေနုအေးကြောင့် လွှင့် မြောနေသော ချစ်သူ၏ ဆံနွယ်စလေးများကို လက်နှင့် ငြင်ငြင်သာသာ ထိုးဖွဆော့ကစားရင်း ချစ်ခွန်းတွေ ဖွဲ့သီကောင်း ဖွဲ့သီ နေပေရော့မည်။ သို့သော် တေပေလွန်းသောကြောင့် ကျွန်တော်ကား ထိုအချိန်မှာ အဖြူအစိမ်းဝတ် အထက်တန်း ကျောင်းသားကြီးဘ၀နှင့် ယက်ကန်ယက်ကန် ဖြစ်နေပါတော့သည်။
ထိုနှစ် (၁၉၈၈)သည် လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အလှုပ်အယမ်း အများဆုံး နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြား တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မတ်လ(၁၂) ရက်နေ့တွင် ကြို့ကုန်းဘူတာရုံ အနီးရှိ “စန္ဒာဝင်း” လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ သီချင်းခွေ ဖွင့်ခိုင်းရာမှ အစပြု၍ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၃ဦးနှင့် အရပ်သား ၄ဦး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါသည်။ အရပ်သား များ၏ ရန်စရိုက်နှက်မှုကြောင့် ကျောင်းသား၃ဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရပါသည်။ မကြာမီ အချင်းဖြစ်ပွားရာသို့ ရပ်ကွက် ပြည်သူ့ကောင်စီဝင်များနှင့် ရဲများ ရောက်လာပြီး ရန်စရိုက်နှက်သော အရပ်သား တချို့ကို ဖမ်းဆီးလေသည်။ သို့သော် နောက်တစ်နေ့မှာ ဖမ်းဆီးထားသော အရပ်သားများအနက် ဇော်ဇော်(ခ) ညီညီလွင်နှင့် ခင်မောင်မြင့် တို့နှစ်ဦးကို ရန်ပွဲ၌ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရဲစခန်းက ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်ပါသည်။ ထိုအခါ ကျောင်းသားများက မကျေမနပ် ဖြစ်ပြီး ဇော်ဇော်(ခ) ညီညီလွင် နေထိုင်ရာ ကြို့ကုန်းအနောက်ရပ်ကွက်၊ ကိုဟင်း လမ်းသွယ်၂ နေအိမ်သို့ ည၈နာရီခန့်မှာ သွားရောက်ပြီး အိမ်တွင်းရှိ ပစ္စည်းတချို့ကို ဖျက်ဆီးရာ အရပ်သားများနှင့် ထပ်မံ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားပြီး ကျောင်းသားနှစ်ဦး ဓားခုတ်ခံရပြန်သည်။ ထိုကြောင့် ကျောင်းသားများက ကျောင်းသို့ ဆုတ်အပြန်မှာ ဘီပီအိုင် အ၀ိုင်းအနီးရှိ သမ၀ါယမဆိုင်ကို မီးတင်ရှို့ကြပါသည်။ အရပ်သားများက တုတ်၊ဓားများ ကိုင်ဆွဲ၍ ၀ိုင်း လိုက်ကြ ရာ ကျောင်းနားရောက်သောအခါ ကျောင်းဝင်းထဲမှ ကျောင်းသားများ ထွက်လာကြသောကြောင့် အရပ်သားများမှာ ရှေ့ဆက်မတိုးတော့ဘဲ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အော်ဟစ်ဆဲဆိုကာ ခဲလုံးများဖြင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်နေတုန်း လုံထိန်းများ ရောက်ရှိလာပြီး ကျောင်းသားအုပ်စုထဲ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သောကြောင့် ကိုဖုန်းမော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး ကိုစိုးနိုင်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ၅-၄-၈၈မှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့မှာ တံတားဖြူ အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားရာ လုံထိန်းများက ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများကို နှစ်ဖက်ပိတ်ပြီး နံပါတ်တုတ်များဖြင့် အတင်းဝင်ရိုက်သောကြောင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတချို့ သေဆုံးပြီး တချို့ အဖမ်းဆီးခံရလေသည်။ ကျောင်းသားများဘက်က မကျေနပ်မှု တစ်စထက်တစ်စ ကြီးထွားလာသောအခါ ဦးနေ၀င်းက ကျောင်းသားထုကို ချွေးသိပ်သည့် အနေနှင့် မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့မှာ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖုတ်ပူမီးတိုက် ဖွဲ့စည်း ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ကျောင်းသားများက မကျေနပ်သဖြင့် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ဆင်နွှဲကြရာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တက္ကသိုလ်များကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်လိုက်ရပါသည်။ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲများ၏ ဂယက်ကြောင့် ဇူလိုင်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော မဆလပါတီ အရေးပေါ် ညီလာခံတွင် ပါတီဥက္ကဌကြီး ဦးနေ၀င်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးစန်းယုနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် တချို့ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဦးနေ၀င်းက ထွက်တော်မူ နန်းကမခွာမီ “စစ်တပ်ဆိုတာ သေနတ်ကို မိုးပေါ် ထောင်မပစ်ဘူး ၊ပစ်ရင်တည့်တည့်ပဲပစ်တယ်”ဟု လူမိုက်ဆန်ဆန် မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့သောကြောင့် နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းများအပြင် ငွေစက္ကူ အကြိမ်ကြိမ် ဖျက်သိမ်းခံရ၍ မကျေနပ်မှုများဖြင့် တအုံနွေးနွေး ဖြစ်နေကြသော ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးမှာ ပဒူအုံကို တုတ်နှင့် ထိုးလိုက်သလို ၈-၈-၈၈မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် အုံကြွခဲ့ကြလေသည်။
ခါတိုင်းနှစ်တွေတုန်းက ထိုအချိန်ဆို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည် တောင်ပိုင်းမှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလေ့ရှိပေမဲ့ ထိုနေ့က ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံး တိမ်ညစ်ညိုများ ကင်းစင်ကာ ရာသီဥတုက ထူးထူးခြားခြား သာယာလျက် ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်း မကျခင် ငြိမ်သက်ခြင်းလားမသိ။ ထိုနေ့က မြို့သူမြို့သားများမှာ တစ်စုံတစ်ရာကို ရင်တဖိုဖိုနှင့် မျှော်လင့်စောင့်စားလျက် ရှိပါသည်။ တချို့ကစုရပ် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသော အထက်တန်းကျောင်းများ အနီးသို့ စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ် ကိုယ်စီနှင့် မရဲတရဲ သွားရောက် အကဲခတ်ကြလေသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် စီးပွားရေးကိုသာ စောက်ချလုပ်ကိုင်သော မြို့လေးတစ်မြို့မှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်မထားသူက များပါသည်။သို့သော်မနက်၉နာရီကျော်ကျော်မှာ ကျောင်းအသီးသီးမှ အဖြူအစိမ်းဝတ် အထက်တန်း ကျောင်းသားများ ကိုယ့်အစုနှင့်ကိုယ် လမ်းပေါ် ထွက်လာကြသည်။
“သပိတ် သပိတ်…………………. မှောက် မှောက်
ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး………………. ဒို့အရေး ဒို့အရေး
တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်……… အလိုမရှိ
အရေးတော်ပုံ…………………….. အောင်ရမည်” စသည့် ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ၈ရက်၊၈လ၊၈၈ကို ကန့်လန့်ကာ ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါသည်။ ထိုနေ့က မြိတ်လေထုထဲတွင် ခွပ်ဒေါင်းအလံကား ၀င့်ဝင့်ထည်ထည် ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း များစွာအတွင်း ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကို တစ်ခါမှ မမြင်တွေ့ဖူးသော မြို့သူမြို့သားများမှာ ကနဦး၌ တအံ့တသြ ငေးကြည့်နေကြသည်။ ထိုနောက် ဘေးဘီဝဲယာတစ်လျှောက် မသိမသာ လိုက်ပါဝန်းရံပေးကြလေသည်။ တချို့ကလည်း ချီတက်လာသော ကျောင်းသားများကို မြင်သောအခါ အိမ်များ၊ဆိုင်များကို ကြောက်လန့်တကြား ဆွဲပိတ်လိုက်ကြသည်။ နည်းနည်း ရဲတင်းသူ တချို့ကတော့ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများကို စားစရာများ လိုက်လံဝေငှပါသည်။
ထိုအချိန်က ကျွန်တော်ကား ဆယ်တန်း အပြင်ဖြေ ကျောင်းသားတစ်ဦးမို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အိမ်မှာ ကျောင်းဝတ်စုံ လဲဝတ်ပြီး ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများနှင့် ပူးပေါင်းကာ မြို့လှည့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနေ့က ကျွန်တော်တို့အားလုံး ခွပ်ဒေါင်းအလံအောက်မှာ ဒို့အရေး ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါသည်။ မျက်နှာကို မမှတ်မိအောင် ပ၀ါစည်း ထားသည့်ကြားမှ နိုင်ငံတော် သီချင်းကို လည်ချောင်းကွဲလုမတတ် အထပ်ထပ် အခါခါ အော်ဟစ်သီဆို ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့က ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မတူညီသူတွေ ခွပ်ဒေါင်းအလံအောက်မှာ စည်းလုံးခဲ့ကြသည်။ ဘယ်သူယူဆောင် လာမှန်း မသိသော လက်ကမ်းစာစောင်တွေကို လမ်းတစ်လျှောက် ဝေငှခဲ့ ကြပါသည်။ မြို့သစ်ဘက် ရောက်သောအခါ အရပ်သားများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာ ကြသောကြောင့် ဆန္ဒပြသူ များသထက် များလာပါတော့သည်။ ထိုအချိန်ထိ တပ်နှင့်ရဲတို့ အရိပ်အယောင်မျှပင် မမြင်ရသေးပါ။ ထိုနေ့က မြို့ထဲတစ်ပတ် လှည့်လည် ဆန္ဒပြပြီး သိမ်တော်ကြီးနား အရောက်တွင် မိခင်နှင့်ကလေး မျက်စောင်းထိုး ၀င်းထဲရှိ ပျဉ်ထောင်အိမ် အပေါ်ထပ်တွင် ရဲတပ်သား ၃-၄ဦး ကာဘိုင်သေနတ်(ထင်သည်) ကိုင်ဆောင်ပြီး အသင့်ပြင် ထားတာ တွေ့ရသည်။ သို့သော် သူတို့ဘက်က စတင်ပစ်ခတ်ခြင်းတော့ မပြုကြပေ။ ဆန္ဒပြ လူအုပ်ကြီးကလည်း ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဆန္ဒပြလျက် ရှိကြလေသည်။ ထိုစဉ် လူအုပ်ကြီး အတွင်းမှ တစ်ဦးဦးက“ပုလိပ် ပုလိပ်”ဟု တိုင်ပေးလိုက်ရာ အချင်းချင်း တိုင်ပင်ထားကြသလို“ရိုက် ရိုက်”ဟု ၀ိုင်းကြွေးကြော်ကြရာ အသင့်ပြင်ထားကြသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စိုးရိမ်လို့လားမသိ၊ သေနတ်များဖြင့် စတင်ပစ်ခတ်ကြလေတော့သည်။ တစ်ဖက်က တကယ်ပစ်ပြီဆိုတော့ လူအုပ်ကြီးမှာ ဖရိုဖရဲနှင့် ခြေဦးတည့်ရာ ပြေးရပါလေတော့သည်။ ထိုနေ့က ကျွန်တော်နှင့် ထ(၁) ကျောင်းသားတစ်ဦး သိမ်တော်ကြီး တောလမ်းတစ်လျှောက် ဆင်းပြေးကြရာ ကျွန်တော့်ဖိနပ် ကျွတ်ကျကျန်နေခဲ့သောကြောင့် ခြေထောက်မှာ ပုလင်းကွဲ ရှပါလေတော့သည်။ ထိုကြောင့် သိမ်တော်ကြီးနှင့် တစ်ဖာလုံခန့် ဝေးသော အိမ်ရှိရာသို့ ခြေနာနာဖြင့် ပြေးရပါလေတော့သည်။ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်သည်အထိ သေနတ်သံက မစဲသေးပါ။ သည်နောက်တော့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကိုကိုဦးနှင့် ညီညီလွင်တို့ ကျဆုံးပြီး ထ(၁)မှာ သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက သုံးထပ်ကျောင်းဆောင်၏ အလယ်ထပ်မှာ ခွပ်ဒေါင်းအလံ လွှင့်ထူပြီး မျက်နှာကို ပ၀ါစည်းကာ ဆောင်းဘောက်ကြီးများဖြင့် နေ့စဉ်မိုးသောက် နိုင်ငံရေး တရားဟောကြသည်။ မြို့သူမြို့သားများက ဘုရားငါးဆူ အပြင်ကွင်း(ယခုဦးမြတ်လေးပန်းခြံ)မှ လာရောက်နားထောင်ကြပါသည်။ အဆိုပါ သပိတ်စခန်းကို အကြောင်းပြုပြီး ထ(၁) ကျောင်းရှေ့တွင် ယာယီ မုန့်ဈေး တန်း လေးတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ သပိတ်စခန်းမှ ကျောင်းသားများစားရန် ထမင်းထုပ်များ ရပ်ကွက်တွေထဲ အလှူခံ ထွက်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာ စေတနာရှင်များ သပိတ်စခန်း၌ လာရောက်လှူဒါန်းကြသော စားစရာများမှာ အလျှံအပယ် ဖြစ်သလို တချို့က စေတနာ့ဝန်ထမ်း ထမင်းဟင်း လာရောက် ချက်ပြုတ်ပေး ကြလေသည်။ သို့သော် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊၃ရက်လောက် အကြာမှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက သပိတ်စခန်းကို ရုတ်သိမ်း လိုက်ကြ လေသည်။
နောက်ပိုင်း နေ့ရက်တွေမှာ နံရံကပ်စာစောင် တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဆင်နွှဲကြသည်။ ကဗျာများ ၊ကာတွန်းရုပ်ပြောင်များ ၊သရော်စာများဖြင့် အစိုးရကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ကြပါသည်။ မနက် မိုးလင်းလာတာနှင့် လမ်းဆုံ လမ်းခွရှိ အိမ်နံရံတွေမှာ ကပ်ထားသော နံရံကပ် စာစောင်များကို တိုးဝှေ့ ဖတ်ရှုရတာ အရသာ တစ်မျိုးပင်။ တစ်နိုင်ငံလုံး သပိတ်တိုက်ပွဲများ အရှိန်မြင့်လာသောအခါ သမ္မတ ဦးစန်းယု၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသော “ရန်ကုန်သားသတ်သမား” ဟု နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားသည့် သမ္မတ ဦးစိန်လွင်မှာ သူ့သမ္မတ သက်တမ်း ၁၈ရက်မှာ ရာဇပလ္လင်ထက်က ဆင်းပေး ရလေတော့သည်။ ဦးစိန်လွင်၏ အရိုက်အရာကို အပျော့ဆွဲသမား ဒေါက်တာမောင်မောင်က ဆက်ခံသည်။ ဒေါက်တာမောင်မောင်က တယောဟောင်းလေး ချွဲသလို “နောင်တစ်ချိန်မှာ သမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကို ပျော်ပျော်ပါးပါး အုတ်မြစ် ချကြတာပေါ့”၊ “ဆန္ဒ မစောကြပါနဲ့” ဟုမည်သို့ပင် ချွဲပြစေကာမူ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ဆန္ဒပြမှုများ ရပ်တန့်မသွားသည့်အပြင် ၀န်ထမ်းများပါ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာသောကြောင့် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားများ ရပ်တန့် ကုန်ပါတော့သည်။ ထို့အခါ တစ်ချိန်က မြို့မှာ အာဏာစက် ပြင်းလှသော ပါတီကောင်စီဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တချို့မှာ မြို့ပြင်ရှိ စစ်တပ်ထဲသွားရောက် ခိုလှုံရပါလေသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မဆလပါတီဝင်များမှာ ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ကြလေသည်။ မြိုတွင်း လူစည်ကားသော လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင် ယာယီစင်မြင့်လေးတွေ ဖန်တီးပြီး ဒီမိုကရေစီ တရားပွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။အရေးအခင်း ကာလအတွင်းထုတ်ဝေသော“ဒို့အရေး၊ပြည်သူ့အမြင်၊ကျောင်းသားမီးဒုတ်၊ပါတီစုံသတင်း၊အောင်ပွဲသစ် ၊ဒို့ခေတ်…..” အစရှိသော နေ့စဉ်သတင်းစာများကတဆင့် မိုးသီးဇွန်၊မောင်မောင်ကျော်၊မင်းကိုနိုင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ဦးနု၊ဦးအောင်ကြီး၊ဦးတင်ဦး(ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း)…..အစရှိသောဒီမိုအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအကြောင်း သိခွင့်ရခဲ့သည်။ ဘီဘီစီ သတင်း ထောက် ခရစ်စတိုဖာဂါးနက် အမည်မှာ ထိုအချိန်က ပြည်သူတွေ ပါးစပ်ဖျား၌ အထူး ရေပန်းစားခဲ့ပါသည်။ကျောင်းသားများက ၁၉၆၂ခုနှစ်ကတည်းက ကွယ်ပျောက်ခဲ့သော ဗကသ၊တကသတွေ ပြန်ဖွဲ့ကြသည်။ ဒေါက်တာမောင်မောင် လက်ထက်တွင် ဂိုဒေါင်ဖောက်မှုများ နေရာအနှံ့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယခင်က အေးချမ်းသာယာလှသော ကျွန်တော်တို့ မြို့ကလေးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ မီးကွင်းပစ်တာတွေလည်း ရှိခဲ့လေသည်။မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းရှိ အကျဉ်းထောင်များမှ ထောင်အကျဉ်းသားများ ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးကြလေသည်။ တချို့က တမင်လွှတ်ပေးလိုက်တာဟု ထင်ကြေးပေးကြသည်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိထိရောက်ရောက် မကိုင်တွယ်ဘဲ လွှတ်ပေးထားသောကြောင့် မင်းမဲ့စရိုက်တွေ ကြီးစိုးလာပါတော့သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် လူမြင်ကွင်း၌ ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေ အတင့်ရဲရဲ ကျူးလွန်လာကြလေသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းချင်သောကြောင့် ယခုလို မသိကျိုးကျွံ ပြုပြီး တမင်တကာ လွှတ်ပေးထားသလားဟု စဉ်းစားစရာပင်။
ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ သမ္မတသက်တမ်း တစ်လတိတိ ခံခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်က “ချောက်ထဲကျဖို့ လက်နှစ်လုံးအလို”ဟူသော ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးကို ပြန်ဖွင့်ကာ စစ်အာဏာ သိမ်းခဲ့လေသည်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီး နောက်တစ်နေ့၊ စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက်နေ့တွင် ကရာနီလမ်းဆုံအနီး၌ ပစ်ခတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီး အရပ်သားတစ်ယောက် ထပ်မံ သေးဆုံးခဲ့ပါသည်။ မှတ်မှတ်သိသိ ထိုစဉ်က မြို့စောင့်တပ်ဖြစ်သော ခလရ(၁၇)၏ တပ်ရင်းမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးတင်အေး(၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဌကြီး ဦးတင်အေး) ဖြစ်ပါသည်။ ဘုံတိုက်စိမ်းအနီးမှာ ဓား၊လှံ လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ထားသော မြို့လူထုက စစ်တပ်ကို ၀ိုင်းထားသော ဖြစ်စဉ်၌ ဗိုလ်မှူးတင်အေး၏ သက်ညှာမှုကြောင့် အလောင်းတွေ တောင်လိုပုံမသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။လူအုပ်ထဲ ကျောင်းသားလေးတွေ ရောနှောနေသောကြောင့် ပစ်မိန့်မပေးတာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ နာရသိန်ထဲ ရောက်ရှိကုန်ကြလေသည်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက အမဲလိုက်ခွေးတွေလို သဲကြီးမဲကြီး အနံ့ခံလိုက်သောကြောင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရလေသည်။
ဘာလိုလိုနှင့် ၈၈လူထုအရေးတော်ပုံကြီး နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် ပြည့်ခဲ့လေပြီ။ ထိုအရေးတော်ပုံကြီးတွင် အဓိက နေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ တချို့ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြလေပြီ။ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးသော ပုဂ္ဂိုလ်တချို့မှာ နိုင်ငံရေး ပါရာဇိကကျပြီး လူတောထဲ မတိုးဝံ့တော့။နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်သူက အစွယ်လိုသူ မိဖုရား၊ ဘယ်သူက အသွားစေခိုင်းသူ ရှင်ဘုရင်၊ဘယ်သူက လေးပစ်ခွင်းသူ မုဆိုးငမိုက်သားဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားခဲ့ရပြီ။ သမိုင်းမှန်ကို လိမ်ညာ၍ မရစကောင်းပါ။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်တော့်အနေနှင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်က သမိုင်း အချိုးအကွေ့တစ်ခုမှာ အသက်လုပြီးပြေးခဲ့ရသော နေ့တစ်နေ့ကို တစ်သက်လုံး အမှတ်တရ ဖြစ်နေမှာ သေချာပါသည်။
Labels:အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း
ပုလောဘက်က ၁၉၈၈ အရေးခင်လုတ်ရှားမှု
ဒီနေ.ဒီရက်က ကျနော့ဘဝရဲ့ တစ်ဘဝမှာ တစ်ခါကြုံခဲ့ရတဲ့ ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ ၂၅ နှစ်ပြည့်မြှောက်ခဲ့ပီဘဲ.. ဆရာဦးဟန်လင်းနှင့်တကွ ကျဆုံး သေဆုံးလေပြီးသော ရဲဘော်သူငယ်ချင်းများအား ဦးညွန်.ဂုဏ်ပြုလျှက်ပါ...
ကျနော်တို.ပြုပြုသမျှသော ကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို.ကို အမျှပေးဝေလိုက်ပါတယ် သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေသားးးးး
Labels:အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း ABSDF အေဘီ တောင်ပိုင်း, အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း
၁၉၈၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ-------မှာ ဘတ်စကား ၄စီးနှင့် ယိုးဒယားထှောက်လှမ်းရေး အကူအညီဖြင့် ယိုးဒယားနိုင်ငံအတွင်းကနေ ဘုရားသုံးဆူ မွန်နယ်မြေ ဘက်ကိုခရီးဆက် ခဲ့ကြပါတယ်။
ဘုရားသုံးဆူကို ဘတ်စကား ၃စီးသာရောက်လာခဲ့ပြီး (ထာဝယ် က ရှေ့နေ ဦးမြင့် သိန်း တို့ကိုစိုးစိုးတို့ ပါတဲ့) ဘတ်စကားတစီးကတော့ မင်းသမီးစခန်းဘက်ကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘုရာသုံးဆူရောက်တော့ အရင်ရောက်နှင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေ တာဝန်ခံတွေ ကကြိုဆိုနေရာချထားပေးကြပါတယ်။
မွန်နဲ့ ကရင် နယ်မြေလု စစ်ပွဲဆင်နွဲ ပြီး စ ကာ လ လေး မို့ဘုရားသုံးဆူဟာ လူသူမရှိ နေတဲ့ ရွာပျက်ကြီး တခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ရောက်လာကြတဲ့ ကျနော်တို့ တတွေကို လူမရှိကြတဲ့ သင့်တော်ရာ နေအိမ်အလွတ်တွေမှာ နေကြဘို့သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေခံတာဝန်ရှိသူတွေက နေရာချထားပေး ခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ
ဘိတ်သား ၆ယောက်နဲ့ ပြည် (သဲကုန်း) သား ၄ယောက် ပေါင်း ၁၀ယောက် တို့ တအိမ်ထဲမှာ နေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဘုရားသုံးဆူကိုရောက်ခဲ့ကြတဲ့ ဘိတ်သားတွေ ကတော့
၂။ ဦးဇင်း (ကို ထွန်းရှိန်)
၅။ ကို အောင်မျိုးလွင်
၆။ ကို စိုးမိုးလှို င်
၇။ (ကို ငွေစိုးဦး)
၉။ ကိုအောင်နိုင် (ပေါတာ)
၁၀။ကို အောင်စိုး (ခ) ကုလားမ
၁၁။ ဦး မင်းလွင်
၁၂။ ( ကို ကြည်စိုး(သရဲ))
၁၄၊ ကို သန့် ဇင် တို့ ဖြစ် ပါတယ်။
(အဲ ဒီ ထဲ က
ကိုဝင်းမြင့်) တို့ ဟာ အိမ်ပြန် မရောက် နိုင်တော့ တဲ့ သူ တွေ အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်အပ့် ပါတယ်။)
(ကိုကြည်စိုး @ သရဲ ကပြည်တွင်းယူဂျီနဲ့ဖမ်းမိပြီထောင်(၁၀)နှစ်ကျ၍
အိမ်ပြန်ရောက်မှာ ဆုံး သွားခဲ့ ပါတယ်။)
( ကိုတူး နှင့်
ကို ငွေစိုးဦး တို့လည်း အိမ်ပြန် ရောက် ပြီး မှ ဆုံးပါးသွားကြတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဒီမို ကရေစီ တော်လှန် ရေး ကာလအတွင်း မှာ တာဝန် ကျေခဲ့ ကြတဲ့ သူတို့ တတွေ ကို ဘိတ် ရဲ့ သူရဲ ကောင်းတွေ အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်အပ့်ပါတယ်။
ဘုရားသုံး ဆူ နယ်မြေ တခြားအဖွဲ့ မှာရောက်နေတဲ့ ဘိတ်သားတွေဖြစ်တဲ့
ကိုအောင်ကြီး နဲ့ကို ဇော်ဝင့် တို့ကိုလည်းဘုရားသုံးဆူကိုရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဘိတ်သားတွေအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုံးက တအိမ်တည်းမှာ အတူနေခဲ့ကြရ ဘူးတဲ့ ချစ်စရာအလွန် ကောင်းတဲ့ပြည်(သဲကုံး) သားအစ်ကိုကြီးတွေ
၃။ (ကို မင်းလွင်)
၄။ ကိုလှမြင့်သန်း (USA)
၅။ ကိုပီတာ (ရန်ကုန်)
တို့ ကို မှတ်မှတ် ရရ၊ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင် ရပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာဘဲ့ ဘုရားသုံးဆူရောက် အတူ နေခဲ့ ကြတဲ့ ကော့သောင်သားတွေကိုလည်းမှတ်မိသလောက်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။
၁။ ကို ဟူစင်း(ကော့သောင်း)
၄။ ဇော်နိင် (ကော့သောင်း)
၇။ ဦးကျော်ထွန်း (ကော့သောင်း)
၈။ အဘိုးကြီးကိုကိုနိုင် (ကော့သောင်း)
ကျနော်တို့ အိမ်ရဲ့ မျက်စောင်းထိုး မှာ နေကြတဲ့ လေတပ့်က အစ်ကိုကြီးတွေကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တုန်လှုပ့်ခြောက်ခြားရေးအဖွဲ့ ဆိုပြီး အမည်ရတဲ့ ရဲဘော်တွေကိုလည်း သတိရ မှတ်မိနေပါတယ်။ နောက် ပိုင်း မှာ လေယာဉ် နှစ်စီး ကို လမ်းကြောင်းလွဲ ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ အရေး ကို ကမ္ဘာ က နေ အာရုံ စိုက် လာ အောင် ထူးခြား ပြောင်မြောက်စွာ စွမ်းဆောင် ခဲ့ကြတဲ့ သူရဲကောင်း တွေ မွေးဖွါးလာတဲ့ အစု ပါဘဲ့၊
မြဝတီ ဦးရဲ ခေါင်၊ဖွါးဖွါး၊ မ အတာ၊ ဖိုး သက်၊ မသန်းဋ္ဌေး၊ မမြတ်မြတ်မိုး၊ မဖြူ ၊ မနီ၊ မချော၊ ကို မောင် မောင် သိန်း(ပြောင်ကြီး)တို့ အစု၊ ကိုမျိုးအေး၊ ကို ရင်ထွေး၊ ကိုရင် အေး၊ ကိုမင်းဝင်း၊ ကိုမူးသာ၊ ကိုနိုင်အောင်၊ကို ဖလော်၊ ကိုသားသား၊ကိုမင်းသူ၊ ကိုမောင်မောင် ကြီး၊ ကိုလှိုင်ဘွား၊ ကိုထွန်းအောင် ကျော် ......စသဖြင့်အေဘီ (၁၀၁) (၁၀၂) ရောက် တော်လှန် သော ညီ အစ် ကို မောင် နှမ တွေ အားလုံးကို လေးစားဦးညွတ် စွာ မှတ်တမ်း တင် အပ့်ပါတယ်။
ငုက်ဖျားတက်တိုင်း တက်ခဲ့တဲ့ သုံးဆူကဆေးခန်း၊ တသက်မှာ တခါ ဆိုရလောက်အောင်၊ မမေ့နိုင်လောက် တဲ့ ဘရုတ်သုတ်ခတွေနိုင်လွန်းလှတဲ့ ဘုရားသုံဆူ ရွာပျက်ထဲက ဘော်လုံးကွင်းမှာ လုပ့်ခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ် ည လေး ကိုလည်း ပြန်မြင်ရောင် သတိရမိပါတယ်။
အသား၊ ငါး စားချင်ကြလွန်းလို့ဘိတ်အစု နှင့် ကော့ သောင်းအစု တို့ပေါင်းပြိး သုံးဆူရွာလည်ကရေကန်ကြီးကို အုပ့်စု လိုက် အိုင်ပက်ခဲ့ ကြတာတွေ၊သေနတ်အစုတ်အပြတ်တွေ၊ လူရိုးခေါင်းတွေ တွေ့ ခဲ့ကြတာတွေကိုပြန်တွေးကာမြင်ရောင်မိပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေတုံးက ကြုံတွေ့ တာတွေ ဟာ တသက်တာ မေ့မရနိုင် တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေပါဘဲ့။
၁၉၈၈ နှောင်းပိုင်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် တောတွင်း လူငယ်ထု အခက်အခဲ။ (ဘုရားသုံးဆူဒေသ ခွဲထွက်) (2)
ဒီနေရာမှာ ဖြစ်ပုံ ခြင်း မထင်မှတ်ဘဲ တိုက် ဆို နေတဲ့ အကြောင်းရာ တခု့ကို မရောထွေးအောင် မှတ်တမ်း သေချာစွာ တင်ထားဘို့လိုလာတာတခု့ရှိပါတယ်။ အဲတာက ဘုရားသုံးဆူဒေသကို ဘတ်စ်စကား(၃) စီး နှင့် အုပ့်စုလိုက် ရောက် လာကြတာ အစု (၂) စု ရှိ နေတာ ကိုပါ။ တစု က ကျနေ်ာတို့ရနောင်းကနေ ရောက် လာတဲ့ တစု နှင့် နောက် စုက ( အစ်ကို ကိုကိုဦးတို့ပါဝင်သော မဲဆောက်မြို့နေကျောင်းသားများ၊ မဲဆောက်မြို့မှ အယွတ်ခန်ငှားပေးလိုက်တဲ့ ဘတ်စ်ကားကြီး (၃) စီးဖြင့် ရောက်လာကြတဲ့ အစု ပါ။။ )
အဲဒီ ကွေးဟော့စခန်း မှာ ဘုရားသုံးဆူကနေပြောင်းရွေ့ လာကြတဲ့ ကျနော်တို့တတွေ ဟာ အေဘီ (၁၀၂) စခန်းအတွက်လိုအပ့်တဲ့ဘားတိုက်တွေ ဆောက် ကြ၊ စစ်လေ့ကျင့်ကွင်းတွေဖေါက်ကြနဲ့စည်းစည်းလုံးလုံးပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ရှိကြပါတယ်။ သို့ သော်လည်း တော်လှန် ရေး နိုင်ငံရေး အမ်ြငမတူ တာ မဟုတ်ဘဲ သာမန် မထင်မှတ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေး တခု ကြောင့် ကျနော်တို့ တတွေ ထပ့် ကွဲခဲ့ကြရပြန်ပါတယ်။ အပြစ် (သို့ ) တရာ ခံ ရှာ ရရင် အဲဒီအချိန်တုန်း က ကျနော့် အားလုံးရဲ့ နိုင်ငံရေး လူမူ့ ရေး စတဲ့ အရေးတွေမှာ အမြင်မကျယ်တာတွေ၊ ဒေသ၊ လူမျိုး စွဲ၊ စတာတွေ အပေါ် အခြေခံပြီး အာဏာလွန်ဆွဲမူ့ ၊ အဲ ဒီအချိန်တုန်း က ဦးဆောင် နေကြသူ လူကြိး တွေ ရဲ့ အတ္တကြီးစွာ နိုင်ငံရေးကစားမှူတွေ၊ နယ်မြေခံလက်နက်ကိုင် မဟာမိတ်ရဲ့ကျနော် တို့ကျောင်းသားတွေအပေါ် ထိမ်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားမှု၊ ပြည်ချစ် ခေတ် တခေတ်တခါ က ကျန် နေခဲ့ တဲ့ လူကြီး တွေ နှင့် သူတို့တတွေအပေါ် နားလည်မူ့မပေးနိုင်တဲ့ ကျနော် တို့ရဲ့ သံသယ တွေ၊ .....ထိုထိုသော အကြောင်းတွေ ကြောင့် မည်သို့ပေဆိုစေကားမူ အတူယဉ်တွဲ မနေနိုင်လောက် အောင် ခေါင်းပေါက် ခေါင်းကွဲ ၊ ဒုတ်ဆွဲ ဒါးဆွဲ ကာ လက်လွန် ခြေလွန် တွေ ဖြစ်ပြီး ကျနော် တို့ချစ်တဲ့ ကျောင်းသား စခန်း (၁၀၂) ကနေ ထွက် ခဲ့ ရပြန် ပါတယ်။ (ကျနော် ကို ချစ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း တွေ ကကျနော့် ကိုနောက် ဆုံ တွေ တိုင်း နောက်ပြောင်ခံရ တဲ့ အဖြစ်တခု့က ကျနော့် အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ် နေစေခဲ့ တာ။ ဖြစ်ပုံက စခန်း ကနေ ကျနော် ထွက် တော့ မယ် ဆို တော့ အစ်မ မသန်း ဋ္ဌေး ကို ကျနော် က (သဘောရိုးနှင့်ပါနော်) အစ်မ ကျနော် မွေးထားတဲ့ ကြက်လေး ကို အစ်မ ယူထားပြိး စောင့် ရှောက် လိုက်ပါလို့ပြောပေးခဲ့ တာ၊ ကျနော် စခန်း ကနေ ထွက် သွားပြိး နောက် တနေ့လည်း ရောက် ရော ဟင်းအိုးထဲ ရောက် သွား ပါရော့တဲ့ လေ။ အဲလောက် ထိ ချစ်ဘို့ကောင်းတာများ။စိတ်ချ ရတာများလေ။ စိတ်ကုန် တာ လက်ကုန်ပါဘဲ့)။
၁၉၈၈ နှောင်းပိုင်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် တောတွင်း လူငယ်ထု အခက်အခဲ။ (ဘုရားသုံးဆူဒေသ ခွဲထွက်) (3)
Poe Ziwa ရဲ့ အမြင် ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(ကျနော့် တို့ထဲ က တခြားသော ရဲဘော်များ ရဲ့ မတူသော အမြင်များ အတွေ့အကြုံ များ ကိုလည်း သမိုင်းမှတ် တမ်း တခု့အဖြစ် ဖေါ် ပြပေးဘို့စီစဉ်နေပါတယ်။ မတူကွဲ ပြား သော အတွေး အမြင် အသိများ ကို ဝင် ရောက် ပါဝင် ဆွေးနွေးပေးဘို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်)
(ကျနော့် မှတ်တမ်းစာအုပ်လေး အမေရိကားမှာ ကျန်ခဲ့တာမို့အသေးစိပ်တွေ မရေးတော့ပါဘူး။ ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ထွက်ခဲ့ကြတာ ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာရယ်။ ထွက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကို နည်းလမ်းမှန်စွာ ဦးဆောင်ပေးသူတွေ ရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုတာတွေပါပဲ။ ၎င်းအတွင်းမှာပင် စီနီယာကျောင်းသားအချို့ ၏ ရာထူးနေရာ ငွေကြေးမက်မောမှု၊ အချင်းချင်း ထိုးကျွေးမှုတို့နိုင်ငံရေးနုနှယ်သည့် ကျနော်တို့ ခံခဲ့ရပါတယ်။)
ကျနော်တို့ က နိဝင်ဘာ (၁၁)ရက် ၁၉၈၈ ရန်ကုန်က ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့ဗကသ (ယူဂျီ)တွေ။ ကျနော်တို့ မှာ စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ဒဂုံ၊ လသာက ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကို ရှေ့ ဆောင်ခေါ်လာတာက ကိုကြည်ဦး (သခင်တင် အဆက်အသွယ်) ကျနော်တို့ က ကျောင်းသားစခန်းရောက်ရင်တော်ပြီ။ မွန်နယ်မြေထဲမှာ လှည့်ပတ် ရွာပေါင်းများစွာ တောင်ပေါင်းများစွာ ကျော်ဖြတ် ပင်လယ်ကိုလည်း စက်လှေသေးသေးလေးနဲ့ညဖက်မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါ့။ နံမည်ကြီးတဲ့ (၁၁၁)လုံး တောင်ကုန်းပေါ်မှာလည်း လေတဟူးဟူးတိုက်ဒဏ်ခံပြီး အေကေ ၄၇ နဲ့တထောင့်ခြင်းပစ်သံ သေနတ်ကိုင်မယ့် ကျနော် တကယ့်ကို ကြောက်ခဲ့တယ်။ (အဲတုန်းက ကျနော့် တို့ စုပေါင်းတဲ့ပိုက်ဆံလေး ဖွားဖွားထံမှာရှိပါတယ်။ အဲဒါကို မွန်ကွန်မင်ဒိုက ခိုးထားတာပါ။ သို့ သော် မွန်ဗိုလ်ကြီးက ကျနော်တို့ အချင်းချင်းခိုးတယ် ထင်ခဲ့လို့သေနတ်ဖောက်ပြီး ကျနော်တို့ ကို တစ်ယောက်ချင်းစစ်ပါတယ်။ အိတ်တွေ အကုန်သွန်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့မနက် ၄နာရီထိ ငုတ်ထုပ် တောင်ထိပ်မှာ အေးလည်းအေး တယောက်ကိုတယောက် ကျောကပ်နေခဲ့ရတာပါ။ မနက်လင်းတော့မှ တောင်အောက်ရေခပ်ဆင်းတဲ့ မွန်အထမ်းသမားများက အကျီ င်္တွေ တွေ့ လို့ ဗိုလ်ကြီးကို လာပြပါတယ်။ ဖွားဖွား အကျီ င်္တွေပါ။ အဲ့မှာ မိုင်းထောင်ထားတဲ့နေရာမှာ ကွန်မန်ဒိုက ပိုက်ဆံနဲ့အကျီ င်္များကို သွားဖွက်ခဲ့တာပါ) ကျနော်တို့စတွေ့ လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်ပါ။ ဘုရားသုံးဆူကို ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ပေမယ့် လမ်းခရီးမှာ ဒီကိစ္စကို မပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ ကျနော့် စိတ်ထဲ ကျောင်းသားစခန်းဆိုတာကိုပဲ အမြန်ရောက်ချင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ (၁)ရက် ကျနော်တို့ ရောက်တဲ့ဘုရားသုံးဆူမြင်ကွင်း ...(ဘာလို့ အဲလေ့ာက်ကြာမှ ကျနော်တို့ ရောက်သလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ က မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို မ၀င်ဘူး ကျောင်းသားစခန်းသွားမည်ပြောသည့်အတွက် (၃)ရက်ခ၇ီးသည် ထိုမျှကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်။ )
၁၉၈၈ နှောင်းပိုင်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် တောတွင်း လူငယ်ထု အခက်အခဲ။ (ဘုရားသုံးဆူဒေသ ခွဲထွက်)(5)
ကျနော်တို့ဦး စွာ ရေကန်ရွာမှာနေထိုင်ပြီး၊ အခြေခံ စစ်သင်တန်း တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မောရဝတီ စခန်းကိုရောက်တော့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး မွန်းမံ သင်တန်းတွေကို ထပ့်တက်ခဲ့ကြပြီး ကျနော်၊ (ကိုထူး)၊ အောင်ကိုကိုလတ်၊ (ကိုဝင်းမြင့်)၊ ကိုအောင်နိုင် တို့ က ဆရာ ဦးမြင့်ဆွေ ထံမှ ဆေးသင်တန်းကို အားလပ့်ချိန်များမှာသင်ယူခဲ့ကြပါတယ် ။ တချို့ယူဂျီပြန်ဝင်ဘို့အားသန်ကြတဲ့သူတွေက ရုပ့်ပြောင်းရုပ့်လွဲလုပ့်နည်းတို့ ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကိစ္စတို့ ၊ လက်နက်ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုပုံတို့ အပြင် ဗေဒင် ပညာတွေတောင် ဦးပြည်စိုးဆိုတဲ့ဗေဒင်ဆရာတဦးထံမှသင်ယူကြတာတွေကိုမှတ်မိနေပါတယ်။
ကျနော်တို့ တတွေထဲက အသက်အရွယ် ကျမ္မာ ကြံ့ခိုင်မှုစသဖြင့် သင့်တော်တဲ့ရဲဘော်တချို့ ကိုရွေးချယ်ပြီး ပြည်တွင်းမှ ယူဂျီလမ်းကြောင်းနှင့် ရောက်ရှိလာတဲ့ ကွန်းခြံကုန်းမှ ဦး စိုးလွင်(( စိုးလှ သင် (ကွမ်းခြံကုန်း) )) ဦးဆောင်သော ရဲဘ်ာတချို့နှင့် အတူ ဒ.ည.တ အဖွဲ့ မှ ပထမဦးဆုံး အဖွဲ့ လိုက် စစ်ဆင်ရေးလုပ့်ရန် စီစဉ်တာကိုမှတ်မိနေပါတယ်။
(၁၉၈၉ ခုနှစ် နှစ်လည်ပိုင်း ------နေ့ လောက်မှာ) ကျနော်တို့ ထဲမှ ရဲဘော်တချို့ (၁၀ဦးလို့ထင်ပါတယ်) နှင့် ကွန်းခြံကုန်းမှ ဦး စိုးလွင် ဦးဆောင်သော ရဲဘ်ာတချို့တို့မွန် ဗဟို မှာ ကွန်မန်ဒို သင်တန်းတက်စေ ခဲ့ကြ ပါတယ်။ သင်တန်း ပြီး တဲ့အခါ (အဏ္ဏဝါစစ်ဆင်ရေး ) အဖြစ် မွန် ပြည်သစ်ပါတီမှရဲဘော်တချို့ တို့ နှင့် အတူ ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်ဆင်ရေးမစခင်ကတည်းကပင် သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေဖြစ်နေခဲ့ကြပြီး၊ ထို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများထံအချိန်မှိအကြောင်းကြားရန် ကို ထွန်းရှိန်မှာ ရှေ့ တန်းတနေရာမှ စခန်းသို့ အချိန်မှိသတင်းပေး ဘို့ပြန်လာ ခဲ့သော်လည်း အချိန်မှိမတားဆီးနိုင်ခဲ့ကြပါ။ ထိုကြောင့်ရန်သူအထိမ်းသိမ်းခံ လိုက်ကြရသော ကျနော်တို့ စခန်းမှရဲဘော်များအတွက် စိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ အဲဒီတုံးက ခေါင်းဆောင် လူကြီးများကို မေးမြန်းကြတဲ့အခါ၊ ဒ.ည.တ မှ အတွင်းရေးမှုး အဆင့် တာဝန်ယူထားတဲ့ အတွင်းရေးမှုး တယောက်က အထက်လူကြီးတွေ က ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေကနေ တဆင့် ကြိုပြီး သိနှင့်နေကြပြီးဖြစ်ကြောင်း နဲ့ပွင့်လင်းစွာပြောပြရရင် အဖွဲ့ လှုပ့်ရှားမှုတွေ အဖြစ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ အလှူ ရှင်များ မှ ရန်သူ့ မိဒီယာများမှ တဆင့်သိအောင် တမင် ချကျွေးလိုက်တာလို့ ပြန်ကြားရတော့တော်လှန်ရေးလုပ့်ချင်စိတ်များကုန်သွား မ တတ်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကျနော်တို့ လည်း စစ်ဆင်ရေးတွေနှင့် ပတ်သက်လို့မပြောတော့ပါ။
နောက် အကြောင်းအရာတခုက ပြည်တွင်းမှာလည်း အဘဦးနုတို့ က လည်း ပါတီထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရန် အတွက် ကို လုံးပန်းနေကြ ပြီဖြစ်ပြီး၊ ဒီငြိမ်း မှ လည်း ရွေး ကောက်ပွဲ တွင် အနိုင်ရ နိုင်တယ်လို ယူဆနေကြတဲ့ အချိန် လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုံးက ဦး ဆောင်သူ လူကြိးတွေ အမြင်မှာ စစ်တပ့်က သူတို့ ပေးထားတဲ့ ကတိ အတိုင် လုပ့်ပေး ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အဓိက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်း နဲ့ ငြိမ်း ချမ်းစွာ ဖြေရှင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆနေကြတာကြောင့် လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ကျနော်တို့ လို ကြွ တက် နေကြတဲ့ လူငယ်တတွေ ကို မလိုလားအပ့်တဲ့ စွန့် စားမှုတွေ မလုပ့်ကြစေဘဲ၊ ချွေသိပ့်ထားတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၈၉ နှစ် လယ် လောက်မှာ မောရဝတီ စခန်းမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေ သင်တန်းတွေပြီးတော၊့ သင်တန်းဆင်းပွဲ တွေလုပ့်တော့ ကျနော်တို့ ကို ဦးအောင် နု နှင့် လူကြီးတချို့စခန်း ကို ရောက်လာခဲ့ပြီး
“မင်းတို့ ဘာတွေလိုလဲ။ ဘာတွေဖြစ်ချင်လုပ့်ချင်ကြလဲ။” လို့ မေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထင်နေတာက သူတို့ ရွေး ကောက်ပွဲမှာ အနိုင် ရပြီး မြန်မာပြည် ကို အောင်နိုင်သူတွေ အဖြစ် ရင်ကော့ မဝင် ကြရသေးခင်မှာတောထဲမှာနေကြရစဉ်မှာကျနော့်တို့တတွေစိတ်မလေကြရအောင်ဘာသင်တန်းတွေ
များထပ့်တက်ချင်ကြလဲ၊ ဘာတွေ သူတို့လုပ့်ပေးနိုင်ကြမလဲလို့ တွေးပြီးမေးတာဖြစ် ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ ကလည်း ကျနော် တို့ထွက်လာကတည်း က မျှော် လင့် ခဲ့ ကြသလို သေနတ်ဘဲ့ကိုင်တိုက် ချင်တယ်။ ပြည်တွင်း ကို ယူဂျီတွေ ပြန် ဝင်ချင်ကြတယ်။ ဒီအတွက် လိုအပ့်တဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေ တပ့်ဆင်ပေးဘို့ ဘဲ့ တောင်းဆိုကြတော့၊ ဦးအောင်နု ကနေ ကျိုးစားပေးပါ့မယ်လို့ ကတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာ လက်နက်တွေမှ မရောက်လာဘဲ အဘ သံမဏီ ဗိုလ်ခင်မောင် ဘန်ကောက်မှာ ပျင်းရင်ဖတ်တဲ့ သိုင်းဝထ္ထု
တွေ အတွဲလိုက် သေတ္တာ လိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ထဲက ခပ့်နောက်နောက် ရဲဘော်တချို့ ကတော့ ငါတို့ ကို ဒီလျှို့ ဝှက် သိုင်းကျင့်စဉ်တွေ ကျင့်ခိုင်းပြီး ဗမာပြည်ထဲကို ပြန်လွတ်ပြီး တိုက်ခိုင်းလိမ့် မယ်လို့ နောက်ပြီး ပြော ကြတာကိုအမှတ်ရနေပါတယ်။
ကျနော်တို့မျှော်လင့်တောင့်တသလို လက်နက်တွေ မရလာကြတော့ ကျနော်တို့ကလေးတွေက လူကြီးတွေက ကတိမတည်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ဦးအောင်နု၊ ဘကြီးအောင်ကညာ တယ် ဆိုပြီး စခန်းထဲမှာ ပြောကြ၊ သီချင်းလုပ့်ဆိုကြတဲ့အကြောင်း ဟာစစ်အစိုးရကထုတ် တဲ့ မြက်ခင်းသစ် မဂ္ဂဇင်း ထဲ မှာတောင်ပါလာခဲ့တာမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီမျာ ထူးခြားတာက ကျနော့် တို့ဒီလိုအပြောင် အပျက် သီချင်းဆိုပြီး စခန်းတွင်းမှာ ရင်ဖွင့်တာဟာ သိပ့်မကြာခင်၊ တရက်၊ နှစ်ရက်အတွင်း မှာဘဲ့ ရန်သူ့စာစောင်တွေ ထဲ မှာပါလာတာကို က၊ ရန်သူဟာ ကျနော်ဆီမှာ ဝင်ရောက်ထိုးဖေါက် ပြီး သိနေခဲ့တာ။ သူတို့ သူလျှို တွေကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိနေတာကိုပြနေခြင်းပါဘဲ့။ လို့မှတ်ယူ ဆခဲ့ကြပါတယ်။ သူလျှို နှင့် ပတ်သက်လို့မှတ်မှတ်ရရ ဇေယျာ ဆိုတဲ့ ရဲဘော်လေးတယောက်ဟာ သူ အဖေ က ဗိုလ်မှုဆိုတာ ကို ပြောပြတတ်ပြီး သူပတ်ထားတဲ့ သူနာရီ ကအသံဖမ်းစက် တွေ ရှိနေတာကို တခြားရဲဘော်တွေ သတိထားမိလာကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ သူ့ ကို တခြားတော်လှန်ရေး နယ်မြေနေရာတွေ မှာလို ဖမ်းတာ၊ ဆီးတာတွေ ကို ဘာမှ မလုပ့်ခဲ့ကြပါ။ သိလာကြရတဲ့အစဦးပိုင်းတွေမှာ သို့ လောသို့ လော စိတ်တွေနဲ့မယုံသင်္ကာ စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်၊ လူကြီးတွေရဲ့အမျှော်အမြင် ကြီးမှု၊ အတွေ့ အကြုံ ရင့်ကျင့် မှုတွေကြောင့် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ သာမန်ရဲဘော်တဦးအဖြစ် အရင်တုံးကလိုဘဲ့ပုံမှန် ဆက်ဆံနိုင် ခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်စခန်းတွေပြောင်းတော့ ဘုရားသုံးဆူကနေပြန်ဝင်သွားတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
ပြည်ချစ်ခေတ် ကတည်းက တော်လှန်ရေး မှာ ဒီလို သလျှိုလို့စွပ့်စွဲတဲ့အမှုတွေ ပြဿ နာတွေ ကို ကြုံခဲ့ကြဘူးတဲ့ စခန်းကလူကြီးတွေက သူတို့ အတွေ့ အကြုံ တွေ ကို ပြန်ပြောပြ ကြ ကာ၊ ဒီလို အမှု့ တွေ ရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နုံးကျော်ကျော်ဟာ သူလျှို မဟုတ်ဘဲ အသက်ဆုံး ဆုံး ကြရ တဲ့ သူတို့ တတွေရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံတွေ ကိုကြားနာကာ သင်ခန်းစာ ထုတ်ယူနိုင်ကြခြင်းရဲ့ အကျိုး ရလာဒ် လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ နောက်တော့လည်း ဘပေးအသိတွေနှင့် ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နားလည်လာခဲ့ကြရပါတော့တယ်။ ဒီထက်မက နောက်ပိုင်းတွေမှာ တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရင်း ကျနော်တို့ သူ ငယ်ချင်းရဲဘော်တချို့ ဟာ ရနောင်းမှာ ဖမ်းမိတဲ့ သူလျှို တွေ ကိုတောင် အကြောင်းကြောင်းတွေငဲ့ညာကြပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြ တာတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။ တော်လှန်ရေး တခုကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံက၊ ပါဝင်ဆင်နွဲ နေကြရတဲ့အခြေအနေတွေ၊ အချိန်အခါတွေ၊ ပြောင်းလဲမှု့ တွေ အရ ကျနော်တို့တတွေ မှားယွင်းခဲ့ကြတာတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ကြပါတယ်။ သို့ သော် ကျနော် ဆိုလိုတာက၊ ကျနော်တို့ တတွေဟာ ဘဝပေး အခြေအနေတွေကြောင့် ဒီလို ဘဝတွေမှာ ကျင်လည်ဖြတ်သန်း နေခဲ့ကြရပေမယ့်သွေးရှာနေတဲ့လူသတ်ကောင်ကြီးတွေ၊သူသတ်သမားကြီးတွေမဟုတ်ခဲ့ကြပါဘူးဆိုတာကိုပါဘဲ့။
ကျနော်တို့ ကသာ ဒီလို ကိုယ်ခြင်းစာ နာပြီး လွတ်ပေးခဲ့ကြဘူးပေမယ့်၊ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေကိုတော့ ရန်သူဘက်ကမိသွားခဲ့ရင်၊ ထောင် ဒါဏ် နှစ်ရှည်ချခံရတာတို့ ၊ ဘဝတွေ စုတ်ပြတ်သတ်အောင် ပညာပေးခံကြရတာတို့ ၊ ထောင်တွေ အချုပ့်တွေ ကိုတောင် မခေါ်တော့ဘဲ၊ ဖမ်းမိတဲ့နေရာတွေမှာတင် အသတ်ခံကြရတာတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကော့သောင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ အစ်ကိုကြိး တယောက် အဖြစ်မှာ ဆို သူမိသားစု တခု့ လုံး အသတ် ခံ ရတာ တို့ရှိ ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ တာပါ။ပြောပြလို့မကောင်း လောက် အောင် မိသားတစုလုံး ကို ဒုက္ခ ပြုတာခံ ခဲ့ ကြရတာမျိုးပါ။
အဲဒီနောက်တော့ အလောင်းဘုရားစခန်းနဲ့ ဘုရင့်နောင် စခန်းတွေကို ဦးပြည်သိမ်း၊ နှင့် ဦးမြင့်အောင်စိုး၊ ဦးမြင့်ခိုင်စိုး၊ တို့ ညီအစ်ကိုတို့ မှ ဦးဆောင်ကာ U.S.Special Force (retired) မှ မစ္စတာ ဂျိုး လို့ ခေါ်တဲ့ ဗီယက်နမ် စစ်ပြန် Australian SAS (retired) မှ မစ္စတာစန် တို့တွေနဲ့ဖေါက်ခွဲရေး သင်တန်း၊ မြို့တွင်းပြောက်ကျား စစ်ဆင်နည်း၊ ယူဂျီသင်တန်းတို့ ကို စာတွေ့ လက်တွေ့ သင်ကြားတဲ့ သင်တန်းတွေ ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲလိုသင်တန်းတွေဖွင့်တော့၊ အဲဒီသင်တန်းတွေမှာ အဖွဲ့ ပေါင်းစုံက
တော်လှန်ရေးညီနောင်ရဲဘော်တွေနဲ့ ပြန်ဆုံတွေ့ ခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီသင်တန်းရဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးဆက်အဖြစ် လှေယာဉ်ပျံပေးဆွဲမှုနှစ်ခုကို ကျနော်တို့လုပ့်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ပြည်တွင်း ထိုးဖေါက်မှုတွေအတော်များများကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတစု တောခို ကြပြီ
ဒီလို နှင့် ဘဲ့ ကျနော်တို့အ.ထ.က(၄) ကျောင်း မှာ အတူလုပ့်နေကြ တဲ့ သူတွေ လမ်းကြောင်းတွေခွဲပြီး တော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေဆီထွက်ခွါကြဘို့ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ခရီးထွက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ ခရီးစရိတ်တွေ လိုလာပါတယ်။ လိုအပ့်တဲ့ ခရီးစရိတ်အတွက် အ.ထ.က (၄) မှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီး လုပ့်စဉ် တုန်း က ပြည်သူတွေဆီကနေရရှိခဲ့တဲ့ အလှူငွေ ရန်ပုံငွေတချို့ ကို ဆရာမတဦးဆီမှာ အများသဘောတူအပ့်ထားတာရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကတချို့ ကို ကျနော်တို့ကို ခရီး စရိတ် အဖြစ် ထုတ်ပေးဘို့အဲဒီဆရာမအိမ်ကို သွားပြီးတောင်းတဲ့အခါကျတော၊့ (ကျနော့်အထင် ဆရာမကပေးချင်သော်လည်း) ဆရာမ ယောင်္ကျား က “ မင်းတို့ ကို ပေးစရာမရှိဘူး၊ လိုချင်ရင်တော့ ဒါဘဲ့ရမယ်” ဆိုကာ သူ့ခါး တွင် သေနတ်ထိုးထားတာကိုလှစ်ပြပြီး ချိန်းခြောက်တာကို ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ နောင်မှာ အဲဒီ ဆရာမယောင်္ကျားဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဒေါင့်တိုင်တခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော်တို့ သင်ခန်းစာယူဘို့ ကောင်းတာက အဲဒီလို လူမျိုးတွေ လည်းရှိနေတတ်တာကို ကြိုပြီးမတွေးထားနိုင်ခဲ့ကြတာကိုပါဘဲ့။
ဒါနှင့်ဘဲ့ ကျနော်တို့ အသိ မယ်သီလရှင်တပါဆီက နေ လိုအပ့်တဲ့ ခရီး လမ်းစရိတ်အတွက် ငွေအနည်းငယ် ချေးယူကာ အဲဒီငွေနှင့်ဘဲ လမ်းစရိတ်လုပ့်ပြီး ထွက်လာခဲ့ကြရပါတယ်။
ကျနော်၊ စိုးမိုးလှိုင် နှင့် (အမည်မေ့နေပြီဖြစ်တဲ့၊ သာကေတ မယ်သီလရှင်ကျောင်း ရှေ့လဘက်ရည် ဆိုင် က သူငယ်ချင်တဦး) စုစုပေါင်း ၃ဦး တို့ရှပ့်ပုံဘက်သို့ လှေကြုံဖြင့် ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အ.ထ.က(၄) ကျောင်းကနေ ကျနော်ရယ် စိုးမိုးလှိုင် ရယ် ကတော့ ရနောင်း ထိုမှ တဆင့် ဘုရားသုံး ဆူ ကိုရောက်သွား ခဲ့ကြပြီး၊ အောင်မိုး(သာကေတရပ့်ကွက်) ၊ အေးပို၊ လင်းဇော်၊ တင်မိုးထွန်း၊ ဇော်ဦး နှင့် အောင်သူဇာ တို့ အပြင် တခြား ဘိတ်သူဘိတ်သားအတော်များများကတော့ တောလမ်း ခရီးတွေကတဆင့် မင်သမီးစခန်း (အေဘီ ၂၀၁)ကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါဘဲ့၊ ကျနော်တို့ သုံးဦးဟာ ရှပ့်ပုံကိုရောက်သွားခဲ့ကြပြီး၊ ရှပ့်ပုံ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အကူအညီနှင့် ဘိတ်ကကျောင်းသားလူငယ်တချို ၊ ထာဝယ်ကကျောင်းသားလူငယ်တချို့ (မင်သမီးတွင် ပျောက်သွားခဲ့တဲ့ ကိုစိုးစိုး ၊ ရှေ့ နေဦး မြင့်သိန်း တို့ အဖွဲ့ )တို့နှင့် အတူ ခိုးလှေဖြင့် ယိုးဒယားနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့ ကို
ဒီလိုနဲ့ ရနောင်းကို ရောက်တော့၊ ကျောင်းသား အများစု ၊ စုဝေးနေထိုင် ကြရာ ဖြစ်တဲ့ ရနောင်း က မငှက် ဂိုဒေါင်မှာ ခေတ္တ နားခိုခဲ့ပြီး၊ ထိုမှတဆင့် ဘိတ် ကျောင်းသားလူငယ်များ စုဝေးနေထိုင်ကြတဲ့ ကြီးခိ ဂိုဒေါင်အနီးရှိ ပုဇွန်မွေးကန်အနီး က ဘိတ်သားများ ရဲ့ စုရပ့်နေအိမ်သို့ပြောင်း ရွေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ရနောင်းမှာနေထိုင်စဉ် အဲဒီအချိန် က ရနောင်းက ယိုးဒယား ပုလိမ့်တွေဟာ ၈၈ အရေးတော်ပုံ ကနေ တော ခိုလာကြတဲ့ မြန်မာ ကျောင်းသားတွေ ၊ တရာမဝင်ခိုးဝင်လာကြသူတွေအဖြစ် သိနေကြပြီး မကြာခဏ ဖမ်းဆီး ကာ ပြန်ပို့ တာ တွေ လုပ့်တတ်ကြတာ မို့လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် ခက်ခဲ ငတ်ပြတ် စွာ နှင့် ပုန်းလျှိုကွယ်လျှို နေခဲ့ကြရ ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးလုပ့် ရန် အတွက် ကို “ ထင် “ တလုံးဖြင့် ရည်စူး ပြီး၊ တဘက်နိုင်ငံ အတွင်းသို့တရား မဝင် ခိုးဝင်လာခဲ့ ကြ ရ တဲ့ ကျနော်တို့တတွေ ဟာ မိမိ ဝမ်းစာ ရေး အတွက် ကို တခြား အဲ ဒီမှာ အလုပ့် လာလုပ့် နေကြ သူတွေ လို တရာဝင် အလုပ့် ထွက်လုပ့် ကြတာ မျိုး တွေလည်း မ လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ ဒီအတွက်
စားဝတ်နေရေး ဆင်ရဲ ကြပ့်တည်းမှု ကိုစတင် ကြုံ တွေ့ခံစား ခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲလို ကျနော် တို့ တတွေ ငတ်ပြတ် ပြီး ဒုက္ခ တွေ ရောက် နေချိန်မှာ အဲဒီမှာ ကျနော် တို့ ထက် အရင် ဦးစွာ ရောက်နေကြတဲ့၊ အလုပ့်လာလုပ့် နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ က ကျနော် တို့ အပေါ် စာနာ သနားစွာ ဖြစ် ထှောက်ပံ့ကူညီလှူဒါန်း ခဲ့ ကြတာတွေ၊ မငှက်၊ ကြီးခိကဲ့ သို့ယိုးဒယားလုပ့်ငန်းရှင်ကြီး များမှ လူသားခြင်း စာနာ ထှောက်ထား ကာ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတာတွေ ကြောင့် သာ ကျနော် တို့လို ရာ ခရီး ကို ဆက်နိုင်ခဲ့ ကြတာပါ။ သူတို့ တတွေ ရဲ့ အခု့ လို ကူညီပေးခဲ့မှု ကို ကျနော် တို့ရင်ထဲကနေမှတ်တမ်းတင်ထားအပ့်ပါတယ်။
ဒီလို ကျပ့်တည်း ဆင်းရဲတဲ့အချိန် တွေမှာ လူတွေရဲ့ သဘောထားအမှန်တွေ ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာ မျိုး ကိုလည်း ဘဝပေး သင်္ခန်းစာ တခုအဖြစ်၊ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရ ပါတယ်။
ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့အမှန်တရားတခုကိုစိတ်မကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားရရင်တော့ ကျနော် တို့အတူ စု နေကြသူ တွေ ထဲက တချို တချို့တွေ ဟာ တကယ့် အခက်ခဲ အကြပ့်တည်း ဒုက္ခ တွေ ကြုံ တွေ့ လာ ကြတဲ့ အခါ မှာ သူတို့ ဆီမှာပါလာတဲ့ ငွေ နှင့် ပစ္စည်းတွေ ကို သူတို့အစုအဖွဲ့အတွက်သာ လျှို့ဝှက် စွာ လက်သိပ့် ထိုး ပြီးသုံးကြတာကို တွေ့ သိကြရခြင်း ၊ ယိုးဒယား ဘက်မှာ အခက်ခဲ အကြပ့်အတည်း တွေ တွေ့လာခဲ့ ပါက ဆက်သွယ်ပြီး၊ လိုအပ့်တဲ့ အကူအညီ များ (ငွေကြေးအကူအညီကအစ) တောင်းနိုင် ပါတယ် လို့မှာ ကြား ပြီး ပေး လိုက်တဲ့ (အထူးသဖြစ်ဆရာ ဆရာ မ များ ရဲ့ မှာ ကြားချက်) သတင်းအချက်အလက်တွေကို သိရှိ ထားခဲ့ ကြ သော်လည်း အများအတွက် မဝေမျှဘဲ၊ သူတို့ တွေ အတွက် သာ ရှာဖွေ ဆက်သွယ်ကြပြီး၊ ရလာတဲ့ ငွေတွေကို သူတို့ အစု၊ အဖွဲ့ဝင်တွေချဉ်းဘဲ တိတ်တိတ်လေး ဝေမျှစား နေတာကို မကြည့်ချင် မမြင်ချင်ဆုံး တွေ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
လူထုအရေး တော် ပုံ ခေတ် ကောင်းစဉ် ကာလ မှာ၊ အခွင့်အရေး သာခဲ့ စဉ် က ဟို အဖွဲ့ ၊ ဒီအဖွဲ့ တွေ ထဲမှာ ရာထူးကြီးကြီးတွေ ဝင်ယူ၊ လက်သီး လက် မောင် တွေ တန်းကာ လူကြီးလူကောင်း တွေ အဖြစ်၊ ဦးစီး ခေါင်းဆောင် တွေ အဖြစ် နေရာတွေ ဝင် ယူ၊ ဝင်လုပ့် ခဲ့ကြ တဲ့ သူတွေ တချို့ဟာ အခုလို ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ လူကြီးဂုဏ်အင်္ဂါ တွေနှင့်
မညီနိုင်ကြ တော့တဲ့ ဒီလိုလူတွေလည်းရှိသေးပါလားလို့ မှတ်သားထား ခဲ့ရ ပါတယ်။
ထို့ အတူ ဘဲ့
ဒီလိုလူ မျိုး တွေ နှင့် ဆန့် ကျင်ဘက်၊ ကိုယ့်ဘဝ ကို ရဲရဲကြီးပေးဆပ့်ကြ ကာ ညီအစ်ကိုအရင်းတွေ ထက် ကိုချစ်ခင်လေးစား ဘို့ ကောင်းတဲ့ သူတွေကို လည်းကြုံခဲ့ကြရပါတယ်။နောင် မှာ တော်လှန်ရေး ညီအစ်ကို မောင် နှမ တွေ ဖြစ်လာ ခဲ့ ကြပါတယ်။
ဒီနေရာ မှာ ကြုံ ခဲ့ ရတာ ကို ဘယ်သူ့ မျက်နာ မှ မထှောက်ဘဲ မှန် ရားတခု့ကို ပြောရရင်၊
တကယ်တမ်း တော်လှန်ရေးအတွက် ခရီး တွေ ဆက်ကြဘို့ ဖြစ်လာကြ တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ ဖေါက်ပြန်သူ အုပ့်စုထဲက တဦး တယောက်တောင်မှ တော်လှန် ရေး ခရီး တွေ ထဲ ကို ဆက်ပြီး လိုက်ပါနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ အကုန်အိမ်ပြန်သွားကြတာကိုလည်းမှတ်မိနေပါသေးတယ်။
(ကျနော် ဆိုလိုတာက အိမ်ပြန်သွားကြ လို့ ပြန်သွားခဲ့ကြသူတွေ အားလုံး ကို ဖေါက်ပြန် သူတွေ လို့ မဆိုလိုပါ။ ဖေါက်ပြန်သူအများ စု ဟာ စိတ်ဓါတ် ကြံ့ ခိုင်မူ့မရှိဘဲ အလွယ် တကူ လက် လျှော့ အရှုံးပေး ပြန်သွားကြတာ ကို ပြောတာ ပါ)
အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။